**(သြဂုတ် ၃၁၊၂၀၁၀၊ဘာသာပြန် ကိုတီး-ရခိုင့်တံခွန်ဂျာနယ်)**
အသက် ၇၀ကျော်အရွယ်ထိုင်းအိမ်ရှင်အဖွားအိုအားသတ်ဖြတ်ပြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသော မြန်မာအိမ်ဖေါ်
အလုပ်သမ မရီအား၊ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကန်ချနဘူရလီခရိုင်တွင်၊သက်သေခံပစ္စည်းများနှင့်အတူ ဖမ်းဆီးမိပြီးဖြစ်ကြောင်းထိုင်းသတင်းစာများတွင်ရေးသားဖေါ်ပြထားသည်။
ဘန်ကောက်မြို့ဖနခေါနယ်မြေ၊ဘူဖာအဖိလုမ်းရပ်ကွက်၊ ကျလွန်ကုန်လမ်း၊၃ထပ်၊အိမ်အမှတ် ၂၁ /၄တွင် နေထိုင်သည့်အသက် ၇၂ နှစ်အရွယ် မာလီ ဆိုသည့်ထိုင်းအဖွားကြီးအားခြေလက်တို့ ကိုကြိုးတုတ်ပြီး အသက်ရှုမွန်းကြပ်မှုဖြင့်သေဆုံးခဲ့သည်။ မြန်မာအိမ်ဖေါ်အလုပ်သမ မရီ၏လက်ချက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သြဂုတ်လ၂၂ရက်နေ့ ထုတ်၊ထိုင်းသတင်းစာများကရေးသားထားခဲ့သည်။
အသက်၂၃နှစ်အရွယ်ရှိ မရီသည်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကန်ချနဘူခရိုင် ဆိုင်ယိုမြို့ ထာ့စောင်ကျေးရွာ ချောင့်ခဲ့ရပ်
ကွက် အိမ်အမှတ် ၁၂၂ မူ ၁ တွင်ပုန်းအောင်နေထိုင်စဉ် ထိုင်းရဲနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနတို့ ကဖမ်းဆီးမိ
မရီသည်သေဆုံးသွားသောထိုင်းအမျိုးသမီးကြီးအိမ်တွင် ၁၁လကြာလုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးခင်ပွန်းဖြစ်သူ အသက် ၂၈နှစ်အရွယ် မောင်သောင်းနှင့်အတူ ဘန်ကောက်မြို့ပြင်ဖက် ကီလိုမီတာ ၁၀၀ခန့် အကွာရှိလရ်ှဘူလီမြို့အသားလုံးစက်ရုံတွင်လုပ်ကိုင်နေခဲ့သည်။
လင်မယား၂ဦးအလုပ်အတူတူလုပ်ကိုင်၍အဆင်မပြေခဲ့သဖြင့် ခင်ပွန်းဖြစ်သူမောင်သောင်း မြန်မာပြည်နေရပ်ရင်းသို့ပြန်သွားခဲ့ကြောင်း၊မရီလုပ်ဖူးသောအိမ်တွင်တလလျင်လုပ်အားခငွေ(၄၅၀၀)ရာဖြင့် 
ခြေလက်များကြိုးနှင့်တုပ်၍ ရွေဆွဲကြိုး-၁-ကျပ်သား ရွှေဘုရားရုပ်အသေးစားတစ်ဆူ ကျောက်လက်စွပ်-၂-ကွင်း ကျောက်နားကပ်၁စုံရွေလက်ကောက်တစ်ကွင်းနှင့်ဘတ်ငွေ၁၀၄၅၀ပစ္စည်းအားလုံးကာလတန်ဘိုးမှာတစ်သိန်း
ခန့်ရှိကြောင်း ကြီးကြပ်ရေးရဲဌာနချုပ်မှရဲဗိုလ်ချုပ် စထန်ချိုင်ယားနွန်းကပြောသည်။ယ္ခုလူသတ်မှုမှာ
ရောက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း ယမန်နေ့ ထုတ်ဒေလီနယူးနှင့်ခေါင်စွတ်သတင်းစာတွင်ဖေါ်ပြသွားသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း မြန်မာအလုပ်သမ များအိမ်ဖေါ်လုပ်ငန်းအတွင်းသိန်းချီလုပ်ကိုင်လျှက်ရှိကြသည်။
Posted by JACBA at 6:14 PM0comments Links to this post
သားငယ်သည် မိခင်ဖြစ်သူ၏ ဆံထုံးကိုဖြေချကာ သဲကြီးမဲကြီး ရှာဖွေနေသဖြင့် မိခင်က…
“ဟဲ့ကောင်လေး… ဘာလုပ်တာလဲ၊ မေမေ့ခေါင်းမှာ သန်းမရှိပါဘူး”
“ဟာ… မေမေကလည်း၊ သားသန်းမရှာပါဘူး၊ မျက်လုံး လိုက်ရှာနေတာပါ”
“သားရယ်… ဘယ်လို၊ ဘာလို့ ခေါင်းနောက်မှာ မျက်စိရှိရမှာလဲ”ဟု မေးလိုက်ရာ သားဖြစ်သူက ပြန်ဖြေလိုက်သည်မှာကား…
“ဟာ… မေမေကလည်း ဖေဖေက အိမ်ဖော်မိအေးကို ပြောနေတယ်။ နင့်အစ်မနောက်စေ့မှာ မျက်လုံးပါတယ်။ သတိထား၊ လူလစ်ပြီး သေချာမှ ငါ့အခန်းထဲလာခဲ့လို့ ပြောလို့ဗျ.”ဟူ၏။
** စိန်ငှက်ရိုး **
Posted by JACBA at 11:28 AM0comments Links to this post
ဟဟ… လိုချင်တယ်နော်.....ပိုက်ဆံကိုပြောတာ(ပိုက်ဆံ ဖက်ရှင်)
တန်ဖိုးကြီးကြီး သတို့သမီး ဝတ်စုံများကို မကြာခဏ ဆိုသလို ဖက်ရှင် ဒီဇိုင်နာတို့က ပြသ တတ်ကြလေသည်။ ယခု ဖော်ပြထားသော သတို့သမီး ဝတ်စုံကတော့ အမှန်ပင် ပိုက်ဆံတွေ အများကြီးကုန်မည့် ဝတ်စုံဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဝတ်စုံ တစ်ခုလုံးကို ငွေစက္ကူများဖြင့် ပြုလုပ် ဖန်တီး ထားသောကြောင့်ပင်
**khun aung nge khun aung nge**
Posted by JACBA at 6:25 AM0comments Links to this post
သူငယ်ချင်း ဒေါက်တာဇော်မင်း၊ ကိုဌေးသိန်းနှင့် ထောင်ထွက် ရဲဘော်များသို့…
Posted by JACBA at 6:20 AM0comments Links to this post
စိန်ငှက်ရိုးတစ်ယောက် အရက်ဆိုင်ထဲသို့ ၀င်လာခဲ့၏။ ထောင့်ကျကျ စားပွဲတစ်လုံးတွင် ရေချိန်လွန်ပြီး ခေါင်းငိုက်စိုက်ကျကာ ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုသော မိတ်ဆွေတစ်ဦးကို တွေ့လိုက်ရသဖြင့် ငိုရခြင်းအကျိုးအကြောင်းကို မေးမြန်းလိုက်ရာ ထိုသူက…
“ဒီနေ့ ကျနော် ဆရာဝန်ဆီ ရောက်ခဲ့တယ်ဗျာ၊ ဆေးလုံးတွေသောက်ဖို့ ပေးလိုက်တယ်။ ကျနော် သေတဲ့နေ့ အထိ နေ့တိုင်းသောက်ပါတဲ့ဗျာ။”
“ဟာ… ဒါများ အဆန်းလုပ်လို့ ဘ၀သက်တမ်းကုန်တဲ့အထိ တောက်လျှောက်ဆေးသောက်နေကြရတဲ့လူတွေ တစ်ပုံကြီးပါ”ဟု ပြောလိုက်သဖြင့် ထိုသူက ပြန်ပြောလိုက်သည်မှာကား…
“အဲဒါတော့ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆရာဝန်က ကျနော့်ကို သောက်ဆေးပေးလိုက်တာက ဆယ်လုံးထဲဗျ”ဟူ၏။
Posted by JACBA at 6:18 AM0comments Links to this post
ယခုလအတွင်း ဟိုအကြောင်း၊ ဒီအကြောင်း၊ သူတို့အကြောင်း…
** ဥရောပစူပါဖလား အက်သလက်တီကိုဆွတ်ခူး **
(မက်ဒရစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၉-ရက်)
ယူရိုပါလိဂ်ချန်ပီယံ အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းနှင့် ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့သည့် အင်တာမီလန်အသင်းတို့ သြဂုတ်လ ၂၇-ရကနေ့က ဥရောပစူပါဖလားလုပွဲအဖြစ် ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ကြရာတွင် အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းက နှစ်ဂိုး- ဂိုးမရှိဖြင့်နိုင်ပြီး ဖလားဆွတ်ခူးသွားသည်။ (အင်တာနက်)
** တိုက်စစ်မှူး အီဘရာဟင်မိုဗစ် အေစီမီလန်သို့ ပြောင်းရွှေ့ **
ဘာစီလိုနာတိုက်စစ်မှူး အီဘရာဟင်မိုဗစ် အီတလီစီးရီးအေကလပ် အေစီမီလန်သို့ သြဂုတ်လ ၂၈-ရက်နေ့ ညပိုင်းက ပြောင်းရွှေ့သွားပြီဖြစ်သည်။ (အင်တာနက်)
** ကွင်းလယ်ကစားသမား ဘက်ခမ်း အင်္ဂလန်အသင်းတွင် ပါဝင်ကစားနိုင်မည်လော **
(လန်ဒန်၊ သြဂုတ်လ ၂၉-ရက်)
အင်္ဂလန်ကွင်းလယ်ကစားသမား ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းသည် ယခုလစောစောပိုင်းက ယူရို ၂၀၁၂ ခြေစစ်ပွဲတွင် အင်္ဂလန်အသင်းအတွက် ပါဝင်ကစားနိုင်တော့မည်မဟုတ်ကြောင်း၊ ယင်းအတွက် စဉ်းစားစရာမလိုတော့ကြောင်း ၄င်းက ထုတ်ဖော်ပြောကြားသည်။ (အင်တာနက်)
** တယ်ရီနှင့် လမ်းပတ် ယူရိုခြေစစ်ပွဲနှင့် လွဲချော်နိုင် **
ချဲလ်ဆီး ကစားသမားများဖြစ်သည့် လမ်းပတ်နှင့် ဂျွန်တယ်ရီတို့သည် စတုတ်အသင်းနှင့် ကစားခဲ့သည့် ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်တွင် ဒဏ်ရာများ အသီးသီးရခဲ့သဖြင့် ယူရို ၂၀၁၂ ပြိုင်ပွဲ အဖွင့်ပွဲစဉ်များနှင့် လွဲချော်နိုင်ကြောင်း ၄င်းကလပ်က ပြောကြားသည်။ (အင်တာနက်)
** ဒိန်းမတ်တင်းနစ်မယ် ၀င်နီယာစကီ သုံးနှစ်ဆက်တိုက်ဖလားဆွတ်ခူး **
(နယူးဟာဗင် (ဒိန်းမတ်) သြဂုတ်လ ၂၉-ရက်)
ဒိန်းမတ်တင်းနစ်မယ် ၀င်နီစကီသည် နယူးဟာဗင်၌ ကျင်းပသော ပိုက်လော့ချန်ပီယံရှစ် တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲတွင် ပီထရိုဗာအား အနိုင်ရပြီး သုံးနှစ်ဆက်တိုက် ဖလားဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့သည်။ (အင်တာနက်)
** စုစည်းဘာသာပြန်-ကောင်းမြတ်သူ **
Posted by JACBA at 6:14 AM0comments Links to this post
31 Aug, 10// သြဂုတ်လ အတွင်း နိုင်ငံတကာ ထူးခြားသတင်းများ…
** ကမ္ဘာကျော်ဟောလိဝုဒ်သရုပ်ဆောင် ပဲရစ်ဟီလ်တန် မူးယစ်ဆေးဝါးလက်ဝယ်ရှိမှုဖြင့်
(နယူးယောက်၊ သြဂုတ်လ ၂၉-ရက်)
ကမ္ဘာကျော် ဟောလိဝုဒ်သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးပဲရစ်ဟီလ်တန်ကို အမေရိကန်ရဲများက မူးယစ်ဆေးဝါးလက်ဝယ်ရှိမှုနဲ့ သြဂုတ်လ ၂၈-ရက်နေ့က ဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်း ရဲအဖွဲ့က ပြောကြားသည်။ (အင်တာနက်)
** နယူးဇီလန်၌ လေယာဉ်ပြန်ပေးဆွဲရန် ကြိုးပမ်းမှုဖြင့် ဆိုမာလီအမျိုးသမီး ထောင်ဒဏ်
(၀ယ်လင်တန်၊ သြဂုတ်လ ၂၉-ရက်)
နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွင် လေယာဉ်အပိုင်စီးရန် ကြိုးပမ်းသည့် ဆိုမာလီအမျိုးသမီးအား သြဂုတ်လ ၂၈-ရက်နေ့က ထောင်ဒဏ် ကိုးနှစ် ပြစ်ဒဏ်စီရင်လိုက်သည်။ နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွင် လေယာဉ်ပြန်ပေးဆွဲရန် ကြိုးပမ်းမှုဖြင့် ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းမှာ ယခုအကြိမ်သည် ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်။ (ဆင်ဟွာ)
** ဂါဇာကမ်းမြောင်မှ ဒေသခံပြည်သူများ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အခက်အခဲရှိ **
(ဂါဇာ၊ သြဂုတ်လ ၂၉-ရက်)
ဂါဇာကမ်းမြောင်မှ ရာပေါင်းများစွာသော ဖျားနာလူနာများမှာ ဂါဇာကမ်းမြောင်ကို အစ္စရေးတို့ပိတ်ဆို့ထားမှုကြောင့် လိုအပ်သည့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများပေးရန် အခက်အခဲရှိနေသည်ဟု အင်တာနက်သတင်းတွင် ဖော်ပြပါရှိသည်။ (အင်တာနက်)
** ဆူမတြားကျွန်းပေါ်ရှိ စီနာဘတ်မီးတောင်ပေါက်ကွဲထောင်ပေါင်းများစွာသော
ပြည်သူများ ထွက်ပြေးကြရ **
(ဂျကာတာ၊ သြဂုတ်လ ၂၉-ရက်)
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဆူမတြားကျွန်း၌ သြဂုတ်လ ၂၉-ရက်နေ့က နှစ်ပေါင်း ၄၀၀ အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် မီးတောင်ပေါက်ကွဲခဲ့ရာ ထောင်ပေါင်းများစွာသော ပြည်သူများထွက်ပြေးကြရကြောင်း တာဝန်ရှိသူများက ပြောကြားသည်။ (အင်တာနက်)
** ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါကြောင့် လူ ၂၀၀-ကျော် သေဆုံး **
(နယူးဒေလီ၊ သြဂုတ်လ ၂၉-ရက်)
အိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ပိုင်းပြည်နယ်အချို့တွင် ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါဖြစ်ပွားခဲ့ရာ လူ ၂၀၀-ကျော် သေဆုံးခဲ့ကြောင်း အိန္ဒိယသတင်းဌာနက သြဂုတ်လ ၂၈-ရက်နေ့တွင် သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ အဆိုပါ ရောဂါမိုးမှာ ပြည်နယ်များသို့ ပျံ့နှံ့နေပြီး ပြီးခဲ့သည့် နှစ်ပတ်အတွင်း ငါးဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း၊ လူနာ ၁၆၅ ဦးမှာ ဆေးရုံမှ ဆင်းသွားပြီး ၆၀-မှာ ဆေးရုံ၌ ဆေးကုသမှုခံယူနေကြောင်း သိရသည်။ (ဆင်ဟွာ)
** တရုတ်အနောက်တောင်ပိုင်း ငလျင်လှုပ်၊ နေအိမ်အလုံး ၄၀၀-ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ **
(ပေကျင်း၊ သြဂုတ်လ ၂၉-ရက်)
တရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းတွင် သြဂုတ်လ ၂၉-ရက်နေ့က မြေငလျင်လှုပ်ခဲ့ရာ လူ ၁၄-ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်း တာဝန်ရှိသူများက ပြောကြားသည်။ အဆိုပါငလျင်သည် ရစ်ခ်ျတာစကေး ၅ ဒသမ ၀ အဆင့်ရှိပြီး ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၈ နာရီ ၅၃ မိနစ်က လှုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း နေအိမ်ရာပေါင်းများစွာ ပျက်စီးသွားကြောင်း၊ သို့ရာတွင် ထိခိုက်သေဆုံးမှုသတင်းမသိရသေးကြောင်း တာဝန်ရှိသူများက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။ (ဆင်ဟွာ)
** စုစည်းဘာသာပြန်-အာကာကျော် **
Posted by JACBA at 5:54 AM0comments Links to this post
Labels: နိုင်ငံတကာ ထူးခြားသတင်း
မဲဆောက်မြို့တရုတ်ဘုံကျောင်း၏ ဆန်လှူပွဲ၊ မြန်မာပြည်သားများနှင့် ခြိမ့်ခြိမ့်သဲသဲ…
ဟုတ်ကဲ့ပါ ခင်ဗျာ။ ကြည့်ရက်စရာ မြင်ကွင်းတစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ၊ မဲဆောက်မြို့မှာ `မုနိထိ´တရုတ်ဘုံကျောင်း ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ မဲဆောက်မြို့နယ် ရဲစခန်းအနီးမှာပါ။ အဲဒီဘုံကျောင်းဟာ `ဆန်လှူပွဲ´ ဆိုပြီး နှစ်စဉ်ကျင်းပလာတာ အခုဆိုရင် (၄၁)ကြိမ်တောင် ရှိသွားပါပြီ။ အခုနှစ်ထူးခြားချက်ကတော့ မနက်ပိုင်းမှာ အရင်နှစ်လို နေပူကြဲတဲမဟုတ်ပဲ မိုးတဖွဲဖွဲရွာနေတဲ့ ကြားထဲက ပထမအဆင့် ခြေလှမ်းဖြစ်တဲ့ `အစိမ်းရောင် လက်မထိပ်တံဆိပ်ရိုက်နှိပ်ခြင်းနဲ့ အ၀ါရောင် ကတ်ပြား´ ထုတ်ယူခြင်းကို တန်းစီးပြီး တိုးဝှေ့ရယူရခြင်းပါပဲ
ဒီပထမအဆင့်မှာတင် အရင်ကလို မဲဆောက်မြို့ တဖက်ကမ်းက မြ၀တီမြို့ဘက်က ဆန်လာအလှူခံမယ့် သူတွေဟာ ဒီနှစ်မှာတော့ `နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရေးတံတား´(မဲဆောက်- မြ၀တီ)တံတားပိတ်ထားတာမို့ ကုတို့ဆိပ်(ခေါ်)အောက်လှေဂိတ် တွေကနေ သိပ်များများကြီး ကူးမလာနိုင်ကြပါဘူး။
ကူတို့ဆိပ်ပေါင်း (၁၉)ဂိတ်ရှိပေမယ့် (၄၊ ၅)ဂိတ်လောက်ကပဲ ခိုးကူးလာနိုင်ကြတာမို့ မြ၀တီဘက်က လာကြသူတွေ အလွန်နည်းပါးတာကို တွေ့ရပါတယ်။ (ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီကနေ့မှာ မဲဆောက်ရဲစခန်းက တစ်နေ့တာ လွတ်လပ်ရေးပေးထားသလိုမျိုး´လွတ်လပ်စွာ သွားလာ၊ လှုပ်ရှား၊ ပြန်ရောင်းစား လုပ်နေကြတာကို စိတ်မသက်သာစွာနဲ့ပဲ မွန်းလွဲပိုင်း နေပူထဲမှာ ဘ၀နေပူပူထဲက ဆင်းရဲနွမ်းပါးလှသူတွေကို ဒီအတိုင်း ကြည့်နေရပါတော့မယ်။
ဟုတ်တယ်လေ…။ ရဲစခန်းဝင်းထဲမှာတောင် စက်ဘီးတွေ၊ ဆိုက္ကားဆိုက်တွဲတွေရပ်ထားလို့၊ ၀င်အိပ်သူက အိပ်လို့နဲ့ သာမာန်အခြေအနေမှာ ဒီလို ဘယ်လုပ်ရဲပါ့မလဲ။ တစ်နေ့တာလွတ်လပ်ရေးရကြတုန်း ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ရောက် မြန်မာပြည်သားတွေ သွားချင်ရာသွား၊ စားချင်ရာစားကြဦးပေါ့လေ…။
** သတင်းမှတ်တမ်း- မြန်မာပြည်သား...
Posted by JACBA at 7:57 PM0comments Links to this post
သြဂုတ်လအတွင်း နိုင်ငံတကာ ထူးခြားသတင်းများ…
** ဆိုမာလီပင်လယ်ဓားပြများအား တရားစွဲတော့မည် ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ အကြံပေးခန့်အပ် **
(ဂျီနီဗာ၊ သြဂုတ်လ ၂၈-ရက်)
ဆိုမာလီကမ်းလွန်ဒေသ၌ ကျူးလွန်သည့် ပင်လယ်ဓားပြများအား တရားစွဲရေးတွင် အကူအညီပေးရန် ပြင်သစ် နိုင်ငံသား ဂျက်လန်ကို ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်း၏ အထူးအကြံပေးအရာရှိအဖြစ် ခန့်အပ်လိုက် ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ မာတင်နီဆာလီက သတင်းထောက်များအား သြဂုတ်လ ၂၇-ရက်နေ့၌ ပြောကြားသည်။ နိုင်ငံများအား ကူညီပေးရန်နှင့် ဖမ်းမိသော ဆိုမာလီပင်လယ် ဓားပြများအား အရေးယူရန်အတွက် ဂျက်လန်ကို ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းရွေးချယ် လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဆင်ဟွာ သတင်း၌ ဖော်ပြပါရှိသည်။ (ဆင်ဟွာ)
** ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း ဒန်နယ်လီဆက်လက် အားကောင်းလာနိုင် **
(မီယာမီ၊ သြဂုတ်လ ၂၈-ရက်)
ဟာရီကိန်း ဒန်နယ်လီသည် သြဂုတ်လ ၂၇-ရက်နေ့က မုန်တိုင်းအဆင့် ၄ သို့ရောက်ရှိကာ အားကောင်းလာလျက်ရှိသည်။ ယခုနှစ်ရာသီအတွက် အတ္တလန္တစ်သမုဒ္ဒရာမှ ကုန်းတွင်းပိုင်းဝင်ရောက်သည့် မုန်တိုင်းများအနက် ကြီးမားသော ဟာရီကိန်းအဖြစ် ရောက်ရှိလာနိုင်ကြောင်း အမေရိကန် ဟာရီကိန်းဌာနက ပြောကြားသည်။ (ရိုက်တာ)
** ချီလီမိုင်းလုပ်သားအချို့ စိတ်ကျဝေဒနာ ခံစားနေရ **
(ဆန်တီယာဂို၊ သြဂုတ်လ ၂၈-ရက်)
ကြေးနီနှင့် ရွှေတူးဖော်ရေး မိုင်းတွင်း ပြိုကျမှုကြောင့် မြေအောက်အနက် ပေ ၂၃၀၀ ခန့်တွင် အသက်ရှင်လျက် ပိတ်မိနေဆဲဖြစ်သော ချီလီမိုင်းလုပ်သား ၃၃-ဦးအနက် ငါးဦးတွင် စိတ်ကျရောဂါဝေဒနာ ခံစားနေရသော လက္ခဏာများကို တွေ့ရှိရကြောင်း သြဂုတ်လ ၂၈-ရက်နေ့ သတင်းများတွင် ဖော်ပြသည်။ (ရိုက်တာ)
** တစ္ဆေရထား စောင့်ကြည်သူများ ရထားတိုက်ခံရ၍ တစ်ဦးသေဆုံး **
(စတိတ်ဗေးလ်၊ သြဂုတ်လ ၂၈-ရက်)
၁၈၉၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၇-ရက်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ မြောက်ကာရိုလိုင်းနားပြည်နယ် စတိတ်ဗေးလ်မြို့အနီးရှိ တံတားတစ်စင်းကို ဖြတ်သန်းမောင်နှင်ခဲ့သော ရထားတစ်စီးသည်လမ်းချော်၍ တံတားအောက်သို့ထိုးကျခဲ့ရာ လိုက်ပါလာသော ခရီးသည် ၃၀-ဦးခန့် သေဆုံးခဲ့ရသည်။ ယင်းဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ရထားမတော်တဆမှုဖြစ်ပွားခဲ့သော သြဂုတ်လ ၂၇-ရက်နေ့ကျရောက်တိုင်း ယင်းရထား၏ ဘီးသံများနှင့် ခရီးသည်များ၏ အော်ဟစ်သံများကို ကြားနိုင်ကြောင်း ဒေသခံများက ယုံတမ်းပုံပြင်တစ်ပုဒ်သဖွယ်ပြောကြားခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၇-ရက်နေ့တွင် အဆိုပါသဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်ဆန်းအမှန် ဟုတ်မဟုတ် လေ့လာလိုသူ ၁၂-ဦးခန့်သည် ရထားမတော်တဆမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ရထားလမ်းပေါ်သို့ စုရုံးရောက်ရှိနေစဉ် တစ်နာရီလျှင် ၃၅ မိုင်မှ မိုင် ၄၀ ထိ အရှိန်ဖြင့် မောင်းနှင်လာသော တကယ့်ရထားတစ်စင်း ၀င်တိုက်မှုကြောင့် တစ္ဆေရထား စောင့်ကြည့်သူတစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။ (အင်တာနက်)
** စုစည်းဘာသာပြန်-မောင်ချစ်ကြည် **
Posted by JACBA at 12:28 PM0comments Links to this post
မိကျောင်းနဲ့လူ - ဒီလိုကြည်ဖြူစွာ…
khun aung nge khun aung nge
Posted by JACBA at 11:31 AM0comments Links to this post
သန်းရွှေ ခေတ်ကုန်သွားပြီ။ နိင်ငံရေးကစားကွက်သစ်ဖြစ်သွားပါပြီ။ သူကံကြမ္မာကိုသူကိုယ်တိုင်ပဲ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီ။ ခေါင်းဆောင်တွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထွက်တာဟာ နိင်ငံရေးမှာ ပြင်လို့ မရတဲ့အမှားတွေ ဆင်ကန်းတောတိုး လုပ်ရပ်တွေဖြစ်တယ်။ ဒီလုပ်ရပ်က ၁၉၈၈ ခုနစ်မှာ ဇူလှိုင် ၂၃ ရက်နေ့ မှာဦးနေ၀င်းကမဆလပါတီကသူနဲ့ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေထွက်လိုက်ပြီလိုကြေညာလိုက်ရာကနေ၀င်း
ခေတ်ကုန်ဆုံးသွားခဲ့သလိုပါပဲ။သန်းရွှေခေတ်ဟာလည်းအဆုံးသတ်ခဲ့ရ ပါပြီ။ ၁၉၅၈ ခုနစ်တုံးက ဦးနုက ဗိုလ်ချုပ် နေ၀င်းကို ခန အာဏာလွဲပေးမိခဲ့တဲ့အမှားမျိုးပါပဲ။ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းကို သူလူလို့ တွက်မိတာကိုး။ ၁၉၆၂ ခုနစ်အာဏာသိမ်းတော့ဦးနုက ဗိုလ်နေ၀င်းမှာလွတ်ရဲ့ လားလို့တောင် စိတ်ပူမိသေးကြောင်း တာတေစနေသားမှာဖတ်ကြည့်နိင်ပါတယ်။
မီဒီယာသမားတွေဆိုရင် ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းကို သူရဲကောင်းလို ရေးခဲ့ကြပါသေးတယ်။ ဒုတိယကက်စထရိုလို့ တင်စားခဲ့တဲ့ မီဒီယာ သမား ပေါက်လို့ ပဲစားတွေတပ်ပုံကြီးရှိခဲ့ဘူးတယ်။ နိင်ငံရေးဆိုတာကိုနားမှမလည်တာကိုး။
သူရမြင့်အောင်က သန်းရွှေရဲ့ လူရင်းလို့ မီဒီယာသမားတွေ အ ကဲခတ်တွေက ပေါက်ပန်းသေး၊တတ်ယောင်ကားသုံးသပ်နေကြတာဖြစ်တယ်။ သူတို့ ဟာ အာဏာအကြောင်းကို ကောင်းကောင်းမသိသူတွေဖြစ်တယ်။
ဘာဖြစ်လို့ လည်းဆိုတော့ အာဏာ နိင်ငံရေးမှာ လူရင်းဆိုတာမရှိဘူး။ မင်းမှာအမျိုးမရှိလို့ တောင် ဆိုရိုးစကားရှိတယ်။ ဒါဟာ အာဏာရှင်စနစ်ချိန်တဲ့ နိင်ငံရေးမှာ တကယ်ဖြစ်ရပ်မှာဖြစ်တယ်။ သူရမြင့်အောင်ဟာ
အာဏာ အကြောင်းကို တစတစသိလာမယ်။သိလာတာနဲ့ အမျှ သန်းရွှေခေတ်ဟာလည်း ကုန်သွားမယ်။
အထူးသဖြင့် ၇၇ ခုနစ်ဆိုတဲ့အသက်ဟာသန်းရွှေ ကို နေစဉ်နဲ့ အမျှ ကျဆုံးစေနေတယ်။
၁၉၉၄-၉၅ ၀န်းကျင်လောက်အထိ လူတွေအတော်များများ ကဦးနေ၀င်းမှာ အာဏာ ရှိနေတုံးလို့ ယူဆခဲ့ကြတယ်။ အာဏာပိုင်ရှင်သစ်ဖြစ်လာတာကိုမသိကြဘူး။ ကျနော်တို့ လည်းပါခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၂ ခုနစ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန် လူတွေနဲ့ ကျနော်တို့ လျို့ ဝှက်ဆွေးနွေးနေရတဲ့ကာလပါ။
ဆွေးနွေးပွဲတခုမှာ ခင်ညွန့်လူတယောက်က ဦးနေ၀င်းမြေးတွေကိုအရေးယူမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ ဘယ်လို သဘောထားမလဲ လို့ ကျနော်ကို မေးေဲတာ့ မှာ ကျနော် အကဲခတ်မိတယ်။ဦးနေ၀င်းမှာ တကယ် အာဏာမရှိတော့ဘူးဆိုတာကို။ နောက်တော့ သူတို့ဦးနေ၀င်းမြေးတွေကို တကယ်ဖမ်းတော့တာပဲ။
အခုအလှည့်ပြောင်းကို ကျနော်က မြင်တာကတော့ သန်းရွှေ ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ များ ထဲကို စတင်ဝင်ရောက်လာပြီလို့ပြောချင်တယ်။ သန်းရွေအာဏာရှိကောင်းရှိဦးမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျဆုံးမှုခြေလှမ်းပါ။
သူရမြင့်အောင်အတွက် အခွင့်အလန်းတွေ တိုးတက်လာစေနိင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူရမြင့်အောင်ဟာ
နေ၀င်း၊စောမောင်၊သန်းရွှေတို့ လို အမှားမျိုး မကျူးလွန်ဖို့ လိုတယ်။
တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်သစ် ပြောင်းသွားပြီ။ သူရမြင့်အောင်ဖြစ်လာပြီ။ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သူရ မြင့်အောင်လုပ်ရမဲ့ တာဝန်က တခုပဲရှိတယ်။ ဒါကတော့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပဲ။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပူးပေါင်းရမယ်။တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ညှိနိင်းရ မယ်။ သန်းရွှေခေတ်ကိုလွမ်းမနေကြနဲ့ တော့။ ရှေ့ ကိုဆက်ကြတော့လို့တိုက်တွန်းခြင်တယ်။
Posted by ယမုန် at 9:26 AM0comments Links to this post
သူ့အလိုလို ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုတာ မရှိပါ (ရဲဘော် ဖိုးသံချောင်း)
နအဖတွင်း ကုလားဖန်ထိုးတာတွေ ပေါ်လာပြန်ပါပြီ။ သဘာဝကျစွာပဲ အကဲဖြတ်ချက်တွေ၊ တွက်ချက်တာတွေ နေရာတကာမှာ လုပ်ကြတာ တွေ့နေရပါတယ်။ ဒီအပြောင်းအလဲတွေကနေပြီး ဘာအဓိပ္ပာယ်ဆောင်သလဲ၊ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်မလဲ ဆိုတာတွေကိုလည်း ပြောဆိုကြပါတယ်။ အတိုက်အခံတွေ အနေနဲ့ကတော့ နအဖထဲမှာ ရာထူးအာဏာကြောင့်မို့ ကွဲလွဲမှုတွေ ဖြစ်လာမလား၊ ဂိုဏ်းဂဏတိုက်ပွဲတွေ ပြင်ထန်လာမလား၊ ဒါဟာ လူတိုင်းလို ပြောကြ တွက်ကြတဲ့ကိစ္စလို့ ဆိုရင် မမှားပါဘူး။
အရေးကြီးတာက ကိုယ်ဖြစ်စေချင်တဲ့ဘက်ကနေ ပိုမတွက်မိဖို့ပါပဲ။
ဗမာပြည်က စစ်အုပ်စုထိပ်သီးတွေဟာ အာဏာကို ကိုယ်အသက်ရှင်နေတုန်းမှာ လွှဲပြောင်းပေးတယ်ဆိုတာဟာ မရှိသလောက်အဖြစ်အပျက်ပါ။ ဗိုလ်နေဝင်းဟာ အသက် ၉၀ နားနီးအထိ အာဏာကို ဆုပ်ကိုင်ထားပြီး ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံကြီးက ဆောင့်တိုက်လိုက်တော့မှသာ တရားဝင် အာဏာကို စွန့်လွှတ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ စွန့်လွှတ်တယ်ဆိုတာလည်း နောက်အာဏာရှင် တယောက်လက်ကို လွှဲခဲ့တာသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတောင်မှ သူဟာ နောက်ကွယ်ကနေ ကာလတခု ချုပ်ကိုင်နေခဲ့ပါသေးတယ်။
အခုလည်းပဲ နအဖရဲ့ ဒီခြေလှမ်းဟာ တိုင်းပြည်အာဏာကို လက်လွှတ်ဖို့၊ ဒါမှမဟုတ် လက်ဆုပ်ကလေး နည်းနည်းဖြည်ပေးဖို့ လုပ်တာလို့တွက်ရင် မှားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဗိုလ်သန်းရွှေဟာ အဖက်ဖက် သေချာအောင်၊ ပိုင်အောင်လုပ်ပြီး သေချာမှ ဒီလို ခြေလှမ်းမျိုးကို လှမ်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတာ မမေ့သင့်ပါဘူး။ ပြောရရင် သူတို့အနေနဲ့ သူတို့ကို အာဏာပလ္လင်ပေါ်က ပြုတ်ကျစေမှာမျိုးဆိုရင် ဘာမှ မလုပ်ပါဘူး။
ဒီရွေးကောက်ပွဲကို မလုပ်လို့လည်း သူတို့မှာ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ ဒီတော့ ထိုင်နေအကောင်းသား ထသွားမှ အကျိုးမှန်းသိတယ် ဆိုတာမျိုးဖြစ်မယ့် ရွေးကောက်ပွဲမျိုးကို နအဖ ဗိုလ်ချုပ်တွေ မလုပ်တာ သေချာပါတယ်။
ဒါတင်မက နအဖ လုပ်နေပုံဟာ သူတို့ရဲ့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို ပြန်လည် ပြင်ဆင်ခွင့်ရှိတဲ့ အမတ်နေရာ ၂၀ % ကိုပါ လက်ထဲက မလွတ်အောင် လုပ်နေတဲ့ပုံ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်လို့ ခါးတောင်းကျိုက်ထား သူကြီးတွေ တယောက်ပြီးတယောက် ဘေးထိုင်သွားအောင် လုပ်နေတာကြည့်ရင် ဒါကို အလွယ်နဲ့ သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။
အခုနောက်ဆုံးမှာတော့ ကိုယ့်ပြိုင်ဖက်လို့ ယူဆရသူတွေကို လောက်လေးခွနဲ့ တမင်ပစ်တဲ့အဆင့်ကိုတောင် ရောက်နေပါပြီ။ ဖဆပလခေတ်က ပြူစောထီး ပြန်လာနေပါပေါ့လား။
အလားတူပဲ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တဲ့ အခုစစ်တပ်ထိပ်ပိုင်း ကုလားဖန်ထိုးပွဲလည်း ဗိုလ်သန်းရွှေအနေနဲ့ မီးမသေရင် မလုပ်ပါဘူး။ အကုန် သူ့လက်သူ့ခြေ ပြင်ဆင်ပြီးမှ လှမ်းတဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်မှာပါ။
စစ်အုပ်စု၊ စစ်အာဏာရှင်လောကရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း နံပါတ်တူးမထားတဲ့ နံပါတ်ဝမ်းရဲ့ စိတ်တိုင်းကျ စီမံချက် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲတော့ ဗမာပြည်နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်သူတိုင်းအနေနဲ့ အဲဒီငန်းနေရာ ငစွေနေရာယူတဲ့ ကိစ္စမျိုးထဲမှာ မျောပါသွားလို့ မဖြစ်ပါဘူး။
ဒီလောက်ရှင်းနေတဲ့ကိစ္စမှာ နအဖ စစ်အစိုးရကို ကြံဖန်အမှတ်ပေးချင်တဲ့ အရင် အမေရိကန် သံအရာရှိဟောင်း ဆိုတဲ့ လူမျိုးကသာ ‘အကောင်းမြင်ဝါဒ’ နဲ့ ကြည့်တာ၊ ပြောတာကို ကြားရ။ ဖတ်ရပါတယ်။ ဦးတင်ဦးလိုပုဂ္ဂိုလ် ပြောတာကို သတိထား နားထောင်ကြည့်ပါ။ စစ်အာဏာရှင်အကြောင်းကို နေကျေနေတယ်လို့ ဆိုလောက်တဲ့ သူက ဒါမျိုးတွေဟာ ဘာမှ မဆန်းဘူး၊ ဘာမှတွက်မနေကြနဲ့လို့ ပြောသွားတာဟာ မှတ်သားစရာ ကောင်းလှပါတယ်။
ဒီလိုဆိုတဲ့အတွက် နအဖ ဗိုလ်ချုပ်တွေအားလုံး ဒီအစီအမံကို ကျေနပ်သဘောကျတယ်လို့တော့ အလွယ်ပြောလို့ မရပါဘူး။ မုချပဲ မကျေနပ်တာ၊ နာလိုခံခက်ဖြစ်တာတွေ ရှိမှာပါ။ ဒီတကွေ့မှာ နအဖ စစ်အုပ်စုတခုလုံး အဖို့ကတော့ မနိုင်လည်း နိုင်၊ နိုင်လည်း နိုင် ဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီထဲက တချို့သော ဗိုလ်ချုပ်တွေတဦးချင်း အဖို့တော့ သူဌေးဖြစ် ခွေးဖြစ် ပုံအောရတာမျိုး ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဒီတော့ ကံမှောက်မှားလို့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မတော်တဆ ရှုံးသွားတဲ့ စစ်တပ် ထိပ်ပိုင်းတွေဟာ ဒီအရှုံးကို လက်သင့်ခံနိုင်ပါ့မလားဆိုတာ မေးစရာ ဖြစ်လာပါတယ်။ အမှန်ပါပဲ၊ အာဏာရဲ့အရသာကို မြိန်မြိန်ယှက်ယှက်ကြီး မှီဝဲထားကြသူတွေဖြစ်တဲ့အတိုင်း သူတို့ဟာ အာဏာဆိုရင် တိုးလို့သာ ရချင်မယ်၊ ရပြီးသားကို လက်မလွှတ်ချင်တာကတော့ အထူးပြောစရာမလိုပါဘူး။
သူတို့ဟာ ဦးပုည ရေးသလိုပဲ အာဏာကလေးတရွေးလောက်ရှိရင် ‘အင်မတိ အင်မတန်၊ စံချင်တိုင်း စံရတယ်’ ဆိုတာကို ကောင်းကောင်းသိနေကြတယ် ဆိုတာကို ဗိုလ်သန်းရွှေ အသိဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဗိုလ်သန်းရွှေအနေနဲ့ သူ့လူတွေအတွက် ခြေမမြဲ လက်မြဲအောင် စီမံပေးထားလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ရပါတယ်။
ဒါတွေကြောင့် လက်ရှိအခြေအနေမှာ ဒင်းတို့တွင်း ပဋိပက္ခတွေဟာ ပြင်းထန် သည်းသန်လာပေမယ့် ပေါက်ကွဲထွက်လာမယ့် အနေအထားမျိုးတော့ မဟုတ်သေးဘူးလို့ ယူဆရပါတယ်။
တကယ်လို့ နအဖ ဗိုလ်ချုပ်တွေအတွင်းမှာ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွားတွေ ကြောင့် ကွဲကြတယ်ဆိုရင် ပြည်သူလူထုအတွက် အကျိုးရှိဖွယ်ရာ သိပ်မမြင်ပါဘူး။ (ဒီလိုအဖြစ်ဟာ တချိန်မှာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ မပြောနိုင်ပါဘူး) အဲဒီလို သူတို့ချင်း စစ်တပ်ကြီးတွေနဲ့ တိုက်ကြတယ်ဆိုရင် ဒါဟာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်ပဲ ဖြစ်မှာပါ။ ပြည်သူလူထုဟာ မြေဇာပင်အခန်းလောက်ပဲ ပါရမှာပါ။
ဖိနှိပ်တဲ့အုပ်စိုးသူရဲ့ စစ်တပ်ပြိုကွဲတယ်ဆိုတာမှာ အကြောင်းရင်းတွေက အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ကြောင်း သမိုင်းအတွေ့အကြုံတွေ အရ သိရပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ ပြည်သူလူထုအတွက် အကျိုးအရှိနိုင်ဆုံးဟာ လူထုလှုပ်ရှားမှုရဲ့ ဖိအားကြောင့် ကွဲထွက်ခြင်းမျိုးသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကို ဗိုလ်နေဝင်းက အစ ဗမာပြည်က စစ်အုပ်စု ထိပ်သီးတွေဟာလည်း ကောင်းကောင်း နားလည်ရုံမက အစိုးရိမ်ဆုံးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရှစ်လေးလုံးတုန်းက ဗိုလ်နေဝင်းက ဗိုလ်စောမောင်ကို အာဏာသိမ်းခိုင်းလိုက် တာဟာ သူတို့စစ်တပ်ထဲကတချို့ လူထုတိုက်ပွဲထဲကို ပါဝင်လာတာ စပြီးတွေ့ရလာလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုတော့ သူတို့ လုံးဝ လက်ပိုက် ကြည့်မနေပါဘူး။ အမြန်ဆုံး ဖြေရှင်းပစ်ကြပါတယ်။
အမှန်ကတော့ နအဖရဲ့ တပ်မတော်ထဲမှာ အောက်ခြေတပ်မှူးတပ်သား အများစုကြီးဟာ သူတို့ရဲ့ ထိပ်သီးတွေလုပ်နေတာ တွေကို ကျေနပ်ကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်က အနာခံပြီး သူတို့က အသာစံနေကြလို့ မကျေနပ်တာမျိုးရှိသလို နိုင်ငံရေးအရ လေးလေးနက်နက် သဘောပေါက်ပြီး တနေ့မှာ သမိုင်းတရားခံဖြစ်မှာကို မလိုလားသူတွေလည်း ရှိကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တကယ်လို့သာ အခုအချိန်မှာ တပ်မတော်ထဲက ကွဲထွက်လာတယ်ဆိုရင် သူတို့ဟာ ဘယ်သူတွေနဲ့ ပေါင်းရမှာလဲ။ ရှစ်လေးလုံးတုန်းကတော့ လမ်းမပေါ်မှာ လူထုတွေထဲဝင်ပေါင်းလို့ ရပါရဲ့၊ အခုတော့ ဘာမှ မရှိဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒီလို လက်တွဲစရာမမြင်ဘဲနဲ့တော့ ဗိုလ်သန်းရွှေတို့လက်အောက်ကနေ အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ ခွာထွက်လာဖို့ဆိုတာ မလွယ်သေးပါဘူး။
ပြန်ချုပ်လိုက်ရင် အတိုက်အခံတွေအဖို့ ဘောလုံးဟာ ကိုယ့်ကွင်းဖက်မှာပဲ ရှိနေပါတယ်။ ကိုယ်က ဘာမှမလုပ်ပဲ စစ်အစိုးရ၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ စစ်အုပ်စု ပြိုပျက်သွားမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ မမေ့သင့်ပါဘူး။ ကိုယ့်အိမ်ရှေ့က အမှိုက်ပုံကြီး ဟာ တယောက်ယောက်က မဖယ်ရှားရင် ပျောက်မသွားဘူး ဆိုတာလိုပါပဲ။ ။
Posted by ယမုန် at 9:24 AM0comments Links to this post
ဘ၀ရဲ့ အဓိပ္ပါယ် ဆိုတာဘာလဲ.....ဘာဖြစ်လို့ ဒီဘ၀ ဆိုတာကြီး ထဲကို ရောက်လာကြသလဲ...ဘာ ရည်ရွယ် ဦးတည်ချက်တွေ ကြောင့်လဲ...
`ဘ၀ရဲ့အဓိပ္ပါယ် ဆိုတာ ဘာလဲ...ဟုတ်လား...ခဏ နေစမ်း ပါဦးကွာ....ဒီနေ့ ညစာကို တောင် ငါ ဘယ်လို ဖြေရှင်းရမယ် မသိဘူး´..
တခါတလေ..အိမ်အပြန် လမ်းမှာ..နေ၀င်ဖြိုးဖြ..ကောင်းကင်ကြီးကို ငေးကြည့်ရင်း..`ငါဘာလို့..ဒီနေရာမှာ ရောက်နေတာ ပါလိမ့်လို့´...တွေးမိကောင်း တွေးမိပါ လိမ့်မယ်...ဘာလို့ ဒီနေရာမှာ ရောက်နေတာလဲ...ဘာလို့ ဒီကမ္ဘာကြီး ပေါ်ကနေ ပျောက်ကွယ် မသွားသေး တာလဲ...ဒါတွေဟာ ဘာအဓိပ္ပါယ် တွေပါ လိမ့်...။
`ကြည့်ပါဦးဗျာ..ဒီမေးခွန်းကြီး တွေက..သိပ် ကြီးကျယ် လွန်းတယ်...ကျုပ်လည်း မဖြေတတ်ဘူး...ကျုပ်မှာ တခြား ဖြေစရာ မေးခွန်းတွေ တပုံကြီး...နောက်လအတွက်.. မီတာခ ဘယ်လို ပေးရမလဲ..လုပ်ခ အချိန်မှီ ရအောင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ...ခုညစာ ၀ယ်ဖို့ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ..ဒီမေးခွန်းတွေက.. ပိုအရေးကြီးနေတယ်ဗျ...´
ဒီလိုနဲ့ပဲ..ဒီမေးခွန်း တွေကို ဘေးဖယ်ခဲ့တာ..တရက်ပြီး တရက်...တပတ်ပြီး တပတ်..တလပြီး တလ..တနှစ်ပြီး တနှစ် ကြာလာလို့..ဟော..ခုပဲ..ဘ၀ရဲ့..တ၀က်ကျိုးလား..သုံးပုံတပုံလား...လေးပုံသုံးပုံ တွေ လား ရောက်နေကြပီ....ခုထက်ထိလည်း...အဲဒီ.. ဘ၀အဓိပ္ပါယ် ဆိုတာဘာလည်း ဆိုတဲ့ မေးခွန်း အတွက်..အဖြေ ကောင်းကောင်း ထွက်မလာ သေးဘူး....
ဒါတွေဟာ..ဘ၀ဒသာနကြီး တွေပါပဲလို့....အားလုံး တွေးကြမှာပါပဲ..ဘ၀ရဲ့ အစောပိုင်း သက်တမ်း အနှစ်၂၀ လောက်ဟာလဲ..ဒီ ဒသာနကြီး ထဲမှာပဲ ရှိခဲ့လိမ့်မယ်. ..လူတွေကို ဦးဆောင် လမ်းပြနိုင်မဲ့ ဘ၀ဒသာနတခု..ပြဌါန်းနုိုင်ဖို့ကို......ဘယ်နှယ်ယောက်များ.အောင်မြင်လို့..ဘယ်နှစ်ယောက်တောင်..ရှုံးနိမ့်ခဲ့ ကြသလဲနော်...
`နေပါဦး ..ဒါ-ဘာများ စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်စရာလဲ...ဘ၀ဆိုတာ..ရှင်သန် ရပ်တည်ဖို့ပေါ့..ဘာလို့များ..ဒီဘ၀ ဒသာနမေးခွန်း တွေကို..အချိန်ကုန်ခံ အဖြေထုတ် နေမလည်း.´
ဒီလိုပါ။ ဆိုကြပါစို့...တနေ့မှာ...ခရီးသွားတွေ အပြည့်နဲ့..အဝေးပြေး ဘတ်စကားကြီးတစီး...ခင်ဗျားရဲ့ အိမ်ရှေ့မှာ ထိုးဆိုက်လာပြီး..ခင်ဗျားကို ခေါ်တင် သွားတယ်ပေါ့...ပြီးတော့ လမ်းမကြီးပေါ်တက်..တဆင့်...အဝေးပြေး လမ်းကြီးပေါ် ရောက်ပီး...တနာရီ..၆၅မိုင်နှုံးနဲ့ စပြီး မောင်းနှင် တော့တယ်.... ခဏကြာ တော့..ခင်ဗျား ဟာ..ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကဲခတ်ရင်း..ဘေးနားက တယောက်ကို...` ဟေးလူ..ဒီကားကြီးကဘယ်ကို သွားနေတာလဲဗျ...´ လို့မေးလိုက်တယ်..
`အာ...မပူပါနဲ့ဗျာ..ကားနောက်မှာစားစရာတွေမှ..အပြည့်...ကဲ..ပြောနေကြာတယ်..ခုပဲ စားကြ သောက် ကြရအောင်..` လို့..အဲဒီလူက ပြောတယ်...အဲဒါနဲ့.. `အင်း..လူတိုင်းလည်း ဒီလိုပဲ လုပ်နေကြတာပဲ..ငါလည်း လုပ်ပေါ့..´ လို့ တွေးရင်း... သူများတွေ နဲ့ အတူ စားရင်း သောက်ရင်း..ပျော်သွား တာပေါ့....
စားသောက်ပြီး ခဏနေ တော့..လူတွေဟာ..သီချင်းတွေ အော်ဆိုကြပြန်ရော....ခင်ဗျား လည်း ဘယ်နေမလည်း..လိုက်ဆိုတာပေါ့...အတော်လေး ကြာရင်ပဲ..ညနေက စောင်းလာရော...အဲဒီတော့မှ ..ဟိုဒီ အကဲခတ်ရင်း....` တဆိတ်လောက်ဗျာ...ဒီကားကြီးက..ဘယ်ကို သွားနေတာလဲ...ကျွန်တော် တို့ရော.. ဘာလို့ ဒီထဲ ရောက်နေတာလဲ ဗျာ´ လို့...ခုနလူကိုထပ်မေးပြန်တယ်..သူကတော့...ထုံးစံ အတိုင်း..`မပူပါနဲ့ဗျာ...ကဲလာ.. သီချင်း နဲနဲ ထပ်ဆိုကြရအောင်..ပီးရင်..သစ်သီး ဖျော်ရည် ထပ်သောက် ကြတာပေါ့ ´လို့ ပြောတယ်။..ဒီလိုနဲ့ပဲ..ည ရောက်လာတာပေါ့...ခင်ဗျား လည်း.. မောမောနဲ့..ခုံရဲ့ နောက်မှီလေးမှာ မှေးပြီး..အနားယူရင်း.အိပ်ပျော်သွားလိုက်တာ...နောက်တနေ့ မနက်မှပဲ နိုးတော့တယ်... ။
ဘတ်စကားကြီး ကတော့..တနာရီ..၆၅မိုင်နှုံးနဲ့...သွားမြဲသွားနေတုံးပဲ...ခဏနေတော့..ရှေ့ကလူဆီကို ကုန်းလိုက်တယ်..ဘေးကလူကတော့..ငါ့မေးခွန်းတွေကို မဖြေနိုင်တော့တာ သေချာတယ်လို့..ခင်ဗျား တွေးမိတယ်လေ...။
`ဟေ့လူ..ဒီမှာ နားထေင်စမ်းပါအုံး...ဒီကားကြီးက ဘယ်ကို သွားနေတာလဲဗျ..ကျွန်တော်တို့ ဘာလို့ ဒီကားထဲ ရောက်နေတာလဲ..´ လို့ မေးလိုက်တယ်..ဒီလူရဲ့ အဖြေကလည်း ဒီ အတိုင်းပဲ...` မပူပါနဲဗျာ..ခင်ဗျားဘေးက..မှန်ပြတင်း တွေကိုသာ..ပြောင်အောင် တိုက်နေပါ..ပျော်ပျော် သာနေ..ကိုယ့်လူရေ..စားမြဲ..အိပ် မြဲသာနေ..ဒါဟာ..ကျွန်တော်တို့ လုပ်ရမဲ့ အလုပ်ပဲ...´
တရက်ပီးတရက်ကြာလာတော့...စိတ်ပျက်-ပျက်လာတယ်...အဲလိုပဲ..တခြား လူတွေလဲ..တဖြည်းဖြည်းနဲ့ စိတ်ပျက် လာကြတာပေါ့...တကယ့်တကယ်မှာ...အနှစ်၂၀လောက် ကြာလာပြီ ဆိုရင်ပဲ..ဒီလို စိုးရိမ် သောကတွေက..သီးမခံနိုင် လောက်အောင် ဖြစ်လာကြတယ်..လူတိုင်း လူတိုင်းဟာ..ကားကြီး ထဲမှာ..အရင်တုံးက..ပျော်ခဲ့တဲ့ အချိန်မျိူးတွေ မရှိတော့ဘူး...တချို့တွေက ..ဖျားနာလာကြတယ်...တချို့တွေက သေဆုံးကုန်လို့..ကားပေါ်ကနေ ပြစ်ချလိုက် ကြတယ်..တချို့လူတွေဆို အချင်းချင်း ရန်သူတွေတောင် ဖြစ်လာကြပီး..တယောက်နဲ့ တယောက် သည်း မခံနိုင်လောက်အောင် ဖြစ်လာ ကြတယ်..အဲဒီထဲက..တချို့တ၀က် ကတော့..ကားရဲ့ထောင့်မှာ သွားစုပြီး...သူတို့ကို တိုက်ခိုက် ရန်ပြုလာရင် ကာကွယ်ဖို့ ပြင်ကြတယ်..တချို့တွေမှာ..စားစရာတွေ ကုန်သွားပြီး..တချို့မှာတော့..တောင်လို ပုံလာတယ်.. ။
အဲလိုနဲ့ပဲ...ကားထဲမှာပဲ..သားသမီးတွေလည်း ပေါက်ပွားတဲ့ လူက..ပေါက်ပွားပေါ့...ဒီကလေး တွေကိုလည်း.သူ တို့ မိဘတွေက.. ` ဟေး...ပြတင်းမှန်တွေကို တိုက်ကြနော်..´ လို့ဆုံးမတယ်။ ကလေးတွေက.ကျွန်တော်တို့ ဘယ်ကို သွားနေကြတာလည်း...ဘာအတွက်လည်း လို့ မေးတာတောင်...`ကဲပါ..သီချင်း ဆိုစရာရှိဆို..ပျော်စရာရှိပျော်..ပျော်ပျော်နေ သေခဲ´ လို့ပဲ ပြောကြတယ်...
တဖြည်းဖြည်းနဲ့...ဒီမေးခွန်းတွေကို..ဘယ်သူမှ မဖြေနိုင်ဘူးဆိုတာ..သိလာတဲ့ အခါ..အားလုံးဟာ..စိတ်ပူသထက်ပူလာတယ်။ ဘာအကြောင်းပြချက်မှကို မရှိတော့ ဘူးလား...ဘာအဓိပ္ပါယ်မှ မရှိတော့ ဘူးလား...ဒီဘတ်စကားကြီးပေါ်မှာ ရောက်နေတာ..ဘာအတွက်ကြောင့်မှ မဟုတ်ဘူးလား...ဆိုပြီးတော့လည်း..လူတချိူ့ဟာ.အံ့သြ ထိတ်လန့် လာတယ်...အဲဒီတော့..ဒီကားကြီးပေါ်က ဆင်းနိုင်ဖို့အတွက်..တနည်းပဲ ရှိတော့တယ်..ဆိုတာ..အတော်များများက တွေးလာကြတယ်။...ဒီနည်းလမ်းကို တချို့တွေ တကယ်ပဲ အကောင်အထည်ဖော် သွားတာ...မြင်ရတယ်.။ တကယ်တော့..ဒါဟာ..ကိုယ့်ရဲ့ အသက်နဲ့ ရင်းဖို့ စဉ်းစား လာတာပဲ..ဒီဘတ်စကားကြီးပေါ်က ဆင်းရဖို့ ကလည်း ...အဲလို သေပြီး..စွန့်ပစ်ခံရမှပဲ ဖြစ်နိုင်တာကိုး...
ဟောဒီကမ္ဘာဂြိုဟ်ကြီးဟာ...အဲဒီ ဘတ်စကားကြီး ပဲပေါ့။ အာကာသဟင်းလင်းပြင် ကြီးထဲမှာ..တနာရီ..မိုင်သောင်းနဲ့ ချီပြီးတော့ကို ရွှေ့လျား လည်ပတ် နေတယ်...တနေရာရာကို သွားနေတာတော့ သေချာတယ်...ဘယ်ကိုလည်း ဆိုတာကိုလည်း တယောက်မှ မသိဘူး...ဒီလမ်းကြောင်းကြီးပေါ်မှာ အမြဲရှိနေမယ် လို့လည်း ဘယ်သူမှ အာမ မခံနိုင်ဘူး...အရေးအကြီးဆုံးက...အဲဒီကမ္ဘာကြီး ဘယ်ကို သွားနေတယ်ဆိုတာကို တယောက်မှ မသိတာပဲ....
ဒီလို မေးခွန်း..ပုံဖော်ချက် တွေဟာ..တခုခုကို သွေးဆောင် ဖြားယောင်နေ သလိုပါပဲ...။ ငါတို့ဖာသာ နေပါရစေ။
ဒီအတိုင်းပဲ...ဆက်မျောပါ နေကြပြန်တယ်...ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲ..ဒီအကြောင်းအရာ တွေကို မစဉ်းစားဖို့...ကိုယ့် ကို ကိုယ် လှည့်ဖြား ကြမယ်။
တကြိမ် တော့..အမေ က ပြောခဲ့ ပါလိမ့်မယ်...`ဟေး...မင်း- ဒါတွေကို မစဉ်းစားနဲ့..အရမ်း လေးလေးနက်နက် ကြီးတွေ..လျှောက် မတွေးနဲ့...မင်းတွေးချင်သလောက် တွေးလိုရတယ်...အေး..သေချာတာကတော့ မင်း- အများကြီး စဉ်းစားလို့မရဘူး.´ ဆိုတာမျိုးလေ။
အင်္ဂလိပ်ကဗျာဆရာကြီးတယောက်ကတော့..ဒီလိုစပ်ဆိုခဲ့တယ်...သူကတော့ ဟိုတုံးက..နံမယ်ကြီး တက္ကသိုလ်ကြီးတွေမှာ..ဂရိပါမောက္ခကြီးတယောက် အဖြစ်ကျော်ကြားတဲ့.. A. E. Houseman ဆိုတဲ့ကဗျာဆရာကြီး...
`အို..ဘယ်လို အဆိုးမြင် အယူအဆ ကြီးပါလိမ့်...ဘယ်လောက်တောင် စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းလိုက်ပါလိမ့်...´ နော်။
သွားစမ်းပါ ...ဘ၀ဆိုတာ-ဘာလည်း ငါ-မသိဘူး..ဒါပေမဲ့..ခုချိန်မှာ ငါ-သဘောပေါက်တာ ကတော့...သေချာတာ ကတော့..ဒီကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ..လူတိုင်းအတွက်...လုပ်နိုင်တာတွေ ရနိုင်တာတွေ..အများကြီးရှိတယ်...ငါလည်း မြန်မြန်သွားပြီး...ငါနဲ့ ဆိုင်သလောက်..ငါ-ရနိုင်သလောက်..ယူထားတာ ပိုကောင်းမယ်...။
`အေး..မင်းတို့ တွေ ကိုယ့် ကို ကိုယ်မှ မစောင့်ရှောက်နိုင်ရင်..ဘယ်သူက လာပြီး မင်းတို့ကို စောင့်ရှောက်မလည်း...´ ဆိုတာမျိူးပေါ့....
လူတွေဟာ..ကိုစားဖို့..ကိုယ်နေဖို့..ကိုယ်ဝတ်ဖို့..ဆိုတဲ့ အခြေခံ လိုအပ်ချက်တွေကို..ကိုဖာသာ ဖြည့်စွမ်းနိုင်ရမယ် ဆိုတဲ့အသိဟာ...ခေါင်းထဲမှာ စွဲမြဲနေအောင်ကို ရိုက်သွင်းခံထားတာပဲ။ ဟိုး-ကျောက်ခေတ် သံခေတ်ထဲ ကလည်း..လူတွေဟာ..အနဲဆုံး တော့...ဒါတွေကိုလုပ် နိုင်ခဲ့ ရတယ်လေ..။ ဒါပဲလေ....အဲဒီလို သဘောပေါက်မူ...တိုက်တွန်း နိုးဆော်မူတွေနဲ့ပဲ..ကြီးပြင်းလာ ကြတာပဲ..ဒီနေရာကို ဘယ်လို အကြောင်း ကြောင့်ပဲ ရောက်လာ ရောက်လာ..ဘ၀ဆိုတာကြီးက..ဘယ်ကိုပဲ ဦးတည်..ဦးတည်..။ ငါတို့တွေ..ပိုကောင်းအောင် လုပ်ရဦးမယ်..ပိုတိုးတက်ရမယ် ဆိုတာက ပဲ..အရေးကြီးခဲ့တာ မဟုတ်လား။ ကိုယ် ကိုတိုင်က လွဲပြီး..ဘယ်သူကမှ လာပြီး မစောင့်ရှောက်နိုင်ဘူးကိုး.။ သင့်တော်တဲ့ ပညာရေး တခု ရအောင်..ကြိုးစားကြရတယ်..အဲတော့မှလဲ..သင့်တော်တဲ့ အလုပ်တခုရမယ်...လိုအပ်တဲ့ ပိုက်ဆံရမယ်..အဲဒါမှ..စားစရာတွေ...၀တ်စရာတွေ..နေစရာတွေ..၀ယ်နိုင် ခြမ်းနိုင်မယ်...ဒါမှလဲ.အသက်ရှင် ရပ်တည် နိုင်မယ်လေ...
အဲဒီလိုနဲ့ပဲ..ဘ၀ ဒသာနတွေ ကနေပီး...တကယ်လက်တွေ့ ကျတဲ့..ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက် တွေဆီကိုပဲ.. မြန်မြန်ဆန်ဆန်..ဦးတည်လိုက်ကြတယ်။
သိတဲ့ အတိုင်းပဲလေ...ကျောင်းကို စသွားကြတယ်...တတ်နိုင် သလောက်..အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ ပညာရေး တွေယူမယ် ပေါ့....ဒါတွေဟာ..အတွေးတွေကို ဘယ်လောက်တောင် လွှမ်းမိုး လာနေသလဲဆိုရင်.. လူတွေက.ကိုယ့် အစွမ်းအစတွေ ကိုပဲ တွေးတော နေကြတယ်..ငါ့ရဲ့ အနုပညာပါရမီ...ငါ့ရဲ့..အရေးအသား ကျွမ်းကျင်မူ... စက်မူပိုင်းဆိုင်ရာ တတ်ကျွမ်းမူ...စသဖြင့်ပေါ့...လူတိုင်းပဲ.....အသေအချာ တွေးထင်တတ် တာကတော့...ငါတော့..လူသားတွေ အတွက်...တခုခု အကျိူးပြုနိုင်ရမယ်..ဆိုတာမျိူးပေါ့။
တကယ့်တကယ် ခြုံကြည့် လိုက်တဲ့ အခါ...လူတွေ အကုန်လုံးကို လွှမ်းမိုး လာနေတဲ့ အတွေးကတော့...`ငါ...နောက်ထပ် တလုပ်စားဖို့ အတွက်..ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ...´ ဆိုတာပဲ..ဟုတ်တယ် မဟုတ်လား...ဒီအတွေးအခေါ်က..ဟိုး..ကျောင်းသား အရွယ် လေးထဲက လွှမ်းမိုး လာတာလေ..
ကျောင်းကို သွားတယ်.....တက္ကသိုလ်တွေတက်..ဒါမှမဟုတ်..သိပ္ပံကောလိပ် တွေသွား..ဘွဲ့တွေယူ..နောက်ဆုံး.. ခုပြောနေတဲ့..တကယ့် ဘ၀ဆိုတာကြီးက ရောက်လာရော...သိပ် မကြာခင်မှာကို..ဒီကြီးမား ကျယ်ပြန့်တဲ့ လောက ကမ္ဘာကြီးထဲကို.ထွက်လာရရော။ ဒီအတိုင်း ပါပဲလေ....ပြီးရင် လုပ်ငန်းခွင်ထဲကို ၀င်ရမယ်....ဒီလို ဘွဲ့ တွေ..ပညာ အရည်အချင်း တွေရ ဖို့ ..ပြီးရင်ကောင်း ပေ့ ဆိုတဲ့ အလုပ်တွေ ရ ဖို့ ..ဘယ်လောက်တောင် ရင်ဆိုင် ယှဉ်ပြိုင်ရတယ် ဆိုတာ..ပြီးတော့လည်း..ဒီ -ရထားတဲ့ အလုပ်ကလေး မှာ တည်မြဲဖို့ ကြိုးစားရအုံးမယ်..အဲဒီ အရည်အချင်းတွေကိုလည်း အမြဲ တိုးတက်အောင် အသုံးဝင် အောင်ကြိုးစား နေရတယ်...
`ဟေး..မင်းတို့ ဘာလို့ အသက်ရှင် နေတာလဲ´ လို့ များ မေးခံရရင်...`ငါတို့ အသက်ရှင် နေတာ..အသက်ရှင် ရပ်တည်နိုင်ဖို့ပေါ့´ လို့ပဲ... ဖြေရမှာပဲ။...ဒါမှမဟုတ်..`ဟေး..မင်းတို့..ဘာလို့ ပညာတွေ သင်နေတာလည်းလို့ ´..မေးရင်...`ငါတို့..ပညာသင်တာ...ပညာတွေ တတ်အောင် လို့ပေါ့...ဒါမှ..အလုပ် ကောင်းကောင်းရမယ်...အလုပ် ကောင်းကောင်း ရှိမှ...စားနိုင် သောက်နိုင်..ရှင်သန် ရပ်တည်နိုင်မယ်..အဲတော့မှ..သားသမီးတွေကို ကောင်းကောင်း ကျွေးမွေး ပြုစုနိုင်မယ်..ပညာရေး ကောင်းကောင်း ပေးနိုင်မယ်..သူတို့တွေ လည်း အလုပ်အကိုင် ကောင်း ကောင်း ရမယ်..စားနိုင် သောက်နိုင်မယ်..သားတွေ သမီးတွေ..ပြုစု ပျိူးထောင်နိုင်မယ်..ဒီကလေးတွေကလည်း..ပညာတွေ ရှာဦးမယ်.ဒါပဲ ပေါ့´ ..ဒီလိုနဲ့ပဲ.ဒါဟာ.ဘယ်တော့မှ..ဆုံးနိုင်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး....
ဆင်ခြေ ပေးနိုင်ပါတယ်..ဒါတွေ ဒါတွေ..ဘာလို့ လုပ်နေရသလဲဆိုတော့...လိုအပ်မူတွေ ရှိနေလို့ပေါ့...တိရိစ္ဆာန်တွေ လိုပဲလေ..ကိုယ့် ဖာသာ ရှာဖွေ စားသောက်ရမယ် ဆိုတဲ့ သဘာဝ အသိတရားက ရှိနေတာကိုး...လူဆိုတာ...တိရိစ္ဆာန်ထက် ပိုမြင့်ရမယ် ဆိုတာတော့ ကောင်းကောင်းသိတယ်..ဒါပေမဲ့လဲ.....ကိုယ့် ကိုကိုယ် ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရင်း တိရိစ္ဆာန်တွေလိုပဲ ဖြစ်နေကြတယ်...ဒါပေမဲ့..အဲဒီ တိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ မတူတာက..ငါတို့မှာ...တခြား လုံခြုံစိတ်ချမူ တခု ရှိနေသေးတယ် ဆိုတဲ့..ထူးဆန်းတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တခု...နှလုံးသားထဲမှာ ရှိနေတာပဲ... အမှန်တကယ်တော့..အဲဒီထက် ပိုတဲ့..နက်ရှိုင်းတဲ့..ခံစားမူလို့..ပြောရလိမ့်မယ်.....ငါတို့တွေမှာ..ဒီဘ၀.ဒီအသက်ထက် ပိုပီး.. တခုခုတော့ ရှိမှာပဲလို့.တွေးမိ တတ် ကြတာပါပဲ..
သိပ်မတွေး နေပါနဲ့လေ။ ငါ့ ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် မှာလဲ..သန်းပေါင်း များစွာသော..လူတွေ..ဒီလိုပဲ..အသက်ရှင်ရင်း...သူတို့ကို သူတို့ ..လောကကြီးမှာ အရေးပါဖို့...အဓိပ္ပါယ်ရှိဖို့ ကြိုးစားနေကြတယ်...ငါတို့လည်း..ဒီလိုပဲ ကြိုးစားနေရတာပဲ မဟုတ်လား....ယင်ကောင် အုပ်ကြီးထဲမှာ...ကိုဟာလဲ..ယင်ကောင်လေး တကောင်ပါပဲ...ဘာလို့ အသက်ရှင်နေသလဲတော့ မသိတာ အမှန်ပဲ..ဒါပေမဲ့...ကို့ဖာသာကို အရေးပါတယ်လို့တော့..ထင်နေမိတယ်.....ငါဟာသူများနဲ့မတူ..တမူထူးခြားနေတယ်လို့ထင်မိတယ်။
`ငါ့မှာ..ထူးထူးခြားခြား..ပါရမီ တခုတော့ ရှိနေတယ်...ငါဟာ..သူများထက် အရမ်းပိုတော် ပိုတတ် နေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး...ငါသိတယ်..ဒါပေမဲ့...ငါဟာ..သာမန်လူ တယောက် သက်သက်တော့ မဟုတ်နေဘူးကွာ..တနည်းနည်းနဲ့တော့.ငါဟာ. အကျိူးရှိရှိ အသက်ရှင်ပီး..
Never give up all friends.
Please never say good bye.
Posted by JACBA at 6:05 AM0comments Links to this post
**(ယောင်္ကျားတို့ လောက ဟာသများ)**
သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် သူတို့မိတ်ဆွေသစ်တစ်ဦး အကြောင်းကို ဤသို့…
ပ- လူ။ ။ မောင်နီဆိုတဲ့ကောင် သူ့မိန်းမ အိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားတာ ပြန်လိုက်မခေါ်ဘူးလား၊ တော်တော် အကြင်နာတရား မရှိဘူး။ ကိုယ်ချစ်လို့ယူထားတာပဲကွာ…။
ဒု- လူ။ ။ ဟေ့ကောင်… မင်းမသိဘဲနဲ့ အရမ်းအပြစ်မတင်နေနဲ့ ။ငါလည်း သူများတွေကို မေးကြည့်လို့သိထားတာ မကြာသေးဘူး။ အဲဒီ မိန်းမ အိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားတာ အကြိမ်ပေါင်း ရာချီနေပြီတဲ့ကွ.. ဟူ၏။
(ယောင်္ကျားတို့ လောက ဟာသများမှ)
Posted by JACBA at 5:53 AM0comments Links to this post
၁။ ချစ်သူဘ၀ ။ ။ အလကားနေရင်း အကြည့်ချင်းဆုံ၏။
အိမ်ထောင်သည်ဘ၀။ ။ အကြည့်ချင်းဆုံလျှင်လည်း အလကားဖြစ်၏။
၂။ ချစ်သူဘ၀ ။ ။ အလကားနေရင်း ချစ်သူကိုတမ်းတ၏။
အိမ်ထောင်သည်ဘ၀။ ။ ချစ်သူကိုတမ်းတသော်လည်း အလကားဖြစ်၏။
၃။ ချစ်သူဘ၀ ။ ။ ကလေးကိုဘယ်နှစ်ယောက်ယူလိုက်မလဲလို့စိတ်ကူး၏။
အိမ်ထောင်သည်ဘ၀။ ။ စိတ်ကူးတဲ့အတိုင်းကလေးမယူဖြစ်ခဲ့ရင် အကောင်းသားလို့ တွေး၏။
၄။ ချစ်သူဘ၀ ။ ။ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်သမျှ ချစ်သူအားပေးလို၏။
အိမ်ထောင်သည်ဘ၀။ ။ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်သမျှ ဘဏ်တွင်တိတ်တိတ်လေးထားလို၏။
၅။ ချစ်သူဘ၀ ။ ။ မွန်နေသော်လည်း ကိစ္စမရှိဟုဆို၏။
အိမ်ထောင်သည်ဘ၀။ ။ ကိစ္စရှိမှ မွန်၏။
၆။ ချစ်သူဘ၀ ။ ။ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်ဖုန်းပြောပါက တိုးတိုးလေးပြော၏။
အိမ်ထောင်သည်ဘ၀။ ။ ဖုန်းထဲမှာအော်လိုက်ရသည်ကိုပင် အားမရ။
၇။ ချစ်သူဘ၀ ။ ။ ချစ်သူအကြောင်းကဗျာရေးဖွဲ့၏။
အိမ်ထောင်သည်ဘ၀။ ။ ကဗျာရေးသူ ငစနူ။
၈။ ချစ်သူဘ၀ ။ ။ သူငိုလျှင် ကိုယ်လိုက်ငို၏။
အိမ်ထောင်သည်ဘ၀။ ။ သူငိုလျှင် Tv အစီအစဉ်တွေ ကောင်းပြီ။
၉။ ချစ်သူဘ၀ ။ ။ သူ့မွေးနေ့ကို အလွတ်ရ၏။
အိမ်ထောင်သည်ဘ၀။ ။ ကိုယ့်မွေးနေ့ကိုပင် အလွတ်မရ။
၁၀။ ချစ်သူဘ၀ ။ ။ လူတောထဲတွင် လက်ချင်းချိတ်ပြီး၊ သွားလေ့ရှိ၏။
အိမ်ထောင်သည်ဘ၀။ ။ လူတောထဲတွင် မျက်စောင်းခြင်းချိတ်ပြီး၊ သွားလေ့ရှိ၏။
၁၁။ ချစ်သူဘ၀ ။ ။ အစားစားလျှင် ခွံ့ကျွေးမှ ကြိုက်၏။
အိမ်ထောင်သည်ဘ၀။ ။ အစားစားလျှင် ဇွန်းကိုင်လိုက်မှာကြောက်၏။
၁၂။ ချစ်သူဘ၀ ။ ။ အချစ်သီချင်းများသာ နားထောင်၏။
အိမ်ထောင်သည်ဘ၀။ ။ ကက်ဆက်အကြောင်းသာ ပြော၏။
၁၃။ ချစ်သူဘ၀ ။ ။ ချစ်သူအကြောင်းသာပြော၏။
အိမ်ထောင်သည်ဘ၀။ ။ သံသရာမှ လွှတ်မြောက်ရာအကြောင်းသာတွေး၏။
၁၄။ ချစ်သူဘ၀ ။ ။ ချစ်သူလုပ်သမျှ စိတ်ဝင်စား၏။
အိမ်ထောင်သည်ဘ၀။ ။ လူပေါင်းမှားခဲ့သည် အတွက် ရင်ထုမနာဖြစ်၏။
Posted by JACBA at 7:51 PM0comments Links to this post
ဒီကနေ့မှာ ပရီးမီးယားလိဂ်နဲ့ လန်းဦးမလား…
** ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်များ **
06:30 Pm ဘော်လ်တန်- ဘာမင်ဂမ်
08:30 Pm လိ ဗာ ပူ- ၀က်စ်ဘရွန်း
09:15 Pm အက်စတွန်ဗီလာ- အဲဗာတန်
11:30 Pm ဆန်းဒါးလန်း- မန်စီးတီး
မှတ်ချက်။ ။ အထက်ပါအချိန်များသည် မြန်မာစံတော်ချိန်များဖြစ်သည်။
Posted by JACBA at 7:49 PM0comments Links to this post
တီထွင်သူ ....၀ီလျံတောလ်ဘော့စ် ၊ လူးဝစ်စ် ဒက်ဂူရီ ။
လူမျိုး ..........အင်္ဂလိပ် ။
ခုနှစ်............၁၈၃၅ ၊ ၁၈၃၉ ။
ရည်ရွယ်ချက်.....အမြဲစွဲထင်မယ့် ပုံရိပ်များဖန်တီးရေး ။
တိုးတက်မှူရလဒ်......ယနေ့ခေတ် ကင်မရာများ ။
တီထွင်သူ ....ချားလ်စ် ဘက်ဘေ့ခ်ျ ။
တိုးတက်မှူရလဒ်......အသိပညာ နှင့် အီလက်ထရောနစ်ကွန်ပျုတာများ ။
တီထွင်သူ ....ဖက်ဘာမိသားစု ၊ အဲန်ဂျေကွန်တီ ။
လူမျိုး ..........ဂျာမန် ။
ခုနှစ်............၁၇၆၀ ၊ ၁၇၉၅ ။
တိုးတက်မှူရလဒ်......ဖန် ၊ အ၀တ် ၊ ပလတ်စတစ်မှာရေးတဲ့ ခဲတံများ ။
တီထွင်သူ ....ဂျွန်ဒေါ်လန်တန် ။
ရည်ရွယ်ချက်.....ရုပ်ကို အသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာရေး ။
တိုးတက်မှူရလဒ်......အက်တမ်သီအိုရီ ၊ အက်တမ်စွမ်းအင် ၊ အဏုမြုဓာတ်ပေါင်းဖို ။
တီထွင်သူ ...အမ်ဘရော်စီ ပါရီ ။
ခုနှစ် ........၁၆ ရာစုအတွင်း ။
ရည်ရွယ်ချက် ....ခြေတု လက်တုများတပ်ဆင်ပေးရေး ။
တိုးတက်မှုရလဒ်....အခြားကိုယ်ခန္ဓာ အစိတ်ပိုင်းအတုများ ။
တီထွင်သူ ...၀ီလျံ လေး ဘာရွန် ဂျင်နီ ။
ခုနှစ် ........၁၈၅၃ ။
ရည်ရွယ်ချက် ....မြေနေရာ ပိုမိုရရှိရေး ။
တိုးတက်မှုရလဒ်....ခောတ်မီ မိုးပျံတိုက်ကြီးများ ။
တီထွင်သူ ...ဆာ အလဇန္ဒားဖလင်းမင်း ။
ခုနှစ် ........၁၉၂၈ ။
ရည်ရွယ်ချက် ....ရောဂါပေးတဲ့ ဗက်တီးရီးယား နှိမ်နင်းရေး ။
တီထွင်သူ ....အလက်ဇန္ဒား ဂရေဟမ်ဘဲလ်
ခုနှစ် ............ ၁၈၆၀ ။
ရည်ရွယ်ချက် ..စကားပြောဆက်သွယ်ရေး ။
တိုးတက်မှုရလဒ် ....ယနေ့ခေတ် ဆက်သွယ်ရေး၊ မိုဘိုင်းဖုန်း
တီထွင်သူ ....ပိုင်ရာဂျီ ဂျက်ကွက် ဒရော့စ် ။
လူမျိုး ..........ဆွီဒစ်ရှ် ။
ရည်ရွယ်ချက်.....လူသားတို့ အလုပ်စေခိုင်းခြင်း ။
တီထွင်သူ ....ရောဘတ် ၀ပ်ဆင် ။
ရည်ရွယ်ချက်.....ရန်သူ့လေယာဉ်ဝင်လာမှု သတိပေးစေခြင်း ။
တီထွင်သူ ....ဂျော့စတီဗင်ဆင် ။
ရည်ရွယ်ချက်.....ခရီးသည်နဲ့ ကျောက်မီးသွေး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ။
တိုးတက်မှူရလဒ်......ဒီဇယ်ရထား ၊ လျှပ်စစ်ရထား ။
** X _ ရောင်ခြည်**
တီထွင်သူ ....၀ိုင်ဟဲမ် ရွန်ဂျင် ။
တိုးတက်မှူရလဒ်......နည်းပညာ ၊ စက်မှု ၊ဆေးဝါးအတွက် အရေးပါတဲ့ ရောင်ခြည် ။
တီထွင်သူ ....ရောဘတ်ဘွိုင်လီ ၊ ဂျွန်ဂေါ့တာ ။
တီထွင်သူ ....ဆာဟပ်ဖရီဒေဗီ ၊ ဂျေ ၊ ဒတ်ဘယ်လ်ယူစတား ။
လူမျိုး ..........အင်္ဂလိပ် ၊ အမေရိကန် ။
ခုနှစ်............၁၈၀၂ ၊ ၁၈၄၅ ။
ရည်ရွယ်ချက်.....အိမ်မီး ၊ လမ်းမီးထွန်းရန် ။
တီထွင်သူ ....ဂယ်လီလီယို ။
လူမျိုး ..........အီတာလီယန် ။
တိုးတက်မှူရလဒ်......ခေတ်မီလျှပ်စစ်သုံး အပူတိုင်းကိရိယာ ။
** khun aung nge khun aung nge **
Posted by JACBA at 6:49 PM0comments Links to this post
Labels: နိုင်ငံတကာ အခြားသတင်း..
နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှု နိဿယ (၂)
ဗဟုဝါဒ ၊ပေါင်းစပ်ရေး၊ ညီညွတ်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးစ သည် တို့သည် နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှု ၏ သဘောတရားများတွင် အကျုံးဝင်နေပေသည်။ ဧက၀ါဒ၊ ရန်ဘက်စစ်မက်၊ တစ်ဦးတည်း လက်ဝါးကြိး အုပ်ရေး၊ ကွဲပြားခြင်းဖြစ်ခြင်း၊ မတည်ငြိမ်ဖြစ်ခြင်းစသည်တို့သည် နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှု၏ ဆန့်ကျင်ဘက်အခြင်းရာမျာ ဖြစ်ကြသည်။
ပေါင်းစပ်ခြင်းဆိုသည်မှာ မတူသောအကြောင်းအရာများကို ပေါင်းစပ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ မတူခြင်းသည် သဘာဝတရားဖြစ်သည်။ လူသားတို့၏ ကမ္ဘာတွင် ထပ်တူထပ်မျှတူသောအရာဟူ၍ လုံးဝမရှိ။ နည်းနည်းပါးပါးမတူခြင်းနှင့် များများ မတူခြင်းတို့သာခြားနားခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်မတူခြင်းသည် သဘာဝတရားဟု ဆိုရခြင်းဖြစ်သည်။ မတူ၍ ခြားနားနေ၍လည်း မဖြစ်ပေ။ ကမ္ဘာကြီးတွင်ပေါင်းစပ်နေကြရသည်။ တစ်ဦးကို တစ်ဦး အမှီသဟဲ ပြုနေကြရသည်။ ယခင်ကကဲ့သို့ တောတောင်ရေမြေခြားနားသော တံတိုင်းကြိးများက ပြိုကွဲသွားပြိး။ မရှိတော့။ အီလက်ထရွန်းနစ် နည်းပညာကြောင့်လည်း ကမ္ဘာကြီးသည် ပို၍ နီးစပ်နေကြသည်။
တစ်ယောက်ယဉ်ကျေးမှုကို တစ်ယောက်က ယူနေကြသည်။ မိမိတို့၏အမျိုးသားကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှု ရှိလင့်ကစား ယင်း ယဉ်ကျေးမှုတို့ပင်လျှင်အသွင် ပြောင်းစပြုလာသည်။ပေါင်းစပ်ခြင်းဆိုသည်မှာလည်း ညီညွတ်ရေး တရားပင်ဖြစ်သည်။ မတူသော်လည်း ပေါင်းစပ်လျှင် ညီ ညွတ်နိုင်သည်။ ညီညွတ်သွားခြင်း ဆိုသည်မှာလည်း ဆန့်ကျင်မှုများ နည်းပါးသွားသည်ကို ယူ၍ ရသည်။
ဆန့်ကျင်မှုများ နည်းပါးသွားသည်ဆိုလျှင် ရန်ပြုခြင်း လည်း နည်းပါးသွားနိုင်သည်။ ရန်ပြုခြင်း သည် မတည်မငြိမ်ဖြစ်ခြင်းကို အားပေးသည်။ ဒဿန တရပ်တွင် ဆန့်ကျင်ဘက်တို့သည် ညီညွတ်ရေးဟူသော သဘောတရားပင် ပေါ်ထွန်းသည်မှာ အမှန်ပင်။
မတူသော အ၇ာများပေါင်းစပ်၍ ရသလော။ ရနိုင်သည်။ ရသည်။ လူတို့၏ အတွေးအခေါ်သည် ကမ္ဘာတည်စကနှင့် မတူ၊ ပြောင်းလဲ တိုးတတ်လာသည်။ ပြောင်းလဲခြင်းသည် သဘာဝ တရားဖြစ်သည်။ ပြောင်းကို ပြောင်းလဲ ရမည်။
လူသားတို့၏ အတွေးအခေါ်သည်လည်း ကမ္ဘာတည်စနှင့် မတူ ၊ပြောင်းလဲနေသည်။ ယင်းသို့ပြောင်းလဲရခြင်းမှာ ကမ္ဘာကြီး၏ ဖွဲဖြိုးတိုးတတ်လာသော အဖြစ်အပျက်များတို့ကိုမှီ၍အတွေ့အကြုံသည်လည်းပြောင်းလဲလာရသည်။ ကမ္ဘတည်က ကတည်းက ဆိုပါတော့။ သမိုင်းအစကပင်စစ်ပွဲဆိုသည်မှာ ရှိခဲ့သည်။ မတူသော အခြင်းအရာများပေါ်တွင်မှိတည်၍ လက်နက်ဖြင့် ဖြေရှင်းသောအခါ စစ်ပွဲများဖြစ်လာရသည်။ လူမျိုးရေးရာအားဖြင့် မတူညီခြင်း၊ အတွေးခေါ်ရေးရာအားဖြင့် မတူညီခြင်း၊ ယုံကြည်ချက်ရေးရာအားဖြင့် မတူညီခြင်း စသည့် မတူသောအကြောင်းအရာ များကြောင့် မတူခြင်းကို လက်နက်ဖြင့်ဖြေခြင်းသောကြောင့် စစ်ပွဲသည် ဖြစ် ပေါ်လာရသည်။ သိပံ္ပပညာရပ်များ တိုးတတ်လာသောအခါ လက်နက်တို့သည်လည်း ဆန်းပြားလာရသည်။ ထိုအခါ လူသတ်ပွဲသည် ပို၍ အတိုင်းအတာ ကြီးမားလာ ရသည်။ အထူးသဖြင့် ၂၀ ရာစုအစ လောက် က ဖြစ်ပွားသော ကမ္ဘာစစ်ကြီးကလည်း သက်သေခံ နေသည်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီးကတော့ မပြောနဲ့တော့။ ဂျပန်ပြည် ဟီရိုရှိးမား မြို့ပေါ်သို့ အနု မြုဗုံးကြဲ ချ ခြင်း ဖြင့် လူသားတို့၏ လူသတ်ပွဲသည် မည်မျှလောက် ကြီးမားသည်ကို သိရှိကြရပြီ။ ထိုအခါ လူသတ်ပွဲကို ရှောင်ကြဉ် လိုကြသည်။
ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားမှုကြိး ပေါ်ထွန်းလာသည်မှာ အနုမြူ စစ်ပွဲကို ကြောက်ရွံ့၍ နောက်ထပ် အနုမြုစစ်ပွဲမဖြစ်အောင် အားထုတ်ကြခြင်းမှာ စတင်သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ အီလက်ထရွန်းနစ်ပညာ ၊ သိပ္ပံ ပညာများ တိုးတက်လာသည့် အလျှောက် လူသားတို့အချင်းချင်း ပို၍ နားလည်လာသည်မှာ အမှန်ပင်။
လူသားအချင်းချင်း ပိုမို သိရှိလာခြင်းဖြင့်လည်း မတူခြင်းများကို ပြေလည်အောင် ဖြေနိုင်သောနည်းလမ်းများ တွေ့ရှိနိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ယင်းနည်းလမ်းများသည် ဗဟုဝါဒ အယူအဆ ၏ ခက်မြွှာများဖြစ်သည်။ လူသားများတွင် တူသောအရာများ၊ မတူသော သဘာဝများ ကွဲပြားလျှက် တည်ရှိသည်မှာ မှန်သော်လည်း တူသောအချက်များကလည်း အခြေခံ ရှိနေသည်ကိုတွေ့နိုင်သည်။ ယင်းတူသော အချက်အလက်များမှာ စ၍ ညီညွတ်ရေးကို အားထုတ်နိုင်သည်။
လူသားတို့တွင် ခြားနားသော လူမျိုးများရှိသည်။ သို့သော် အာရုံခံစား မှုတွင်တော့ တူကြသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးမြတ်နိုးစိတ်ဟူသည် အာလုံးတွင် တူညီကြသည်။
ယင်းတူညီသော လူသားစိတ်က စတင်၍ ထွက်ခွာကြလျှင် ညီညွတ်ရေးက မဝေးလှပေ။ ပေါင်းစပ်ခြင်းသည်လည်း မဝေးလှပေ။ ယင်းတို့သည် နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှု၏ အစပြုရာဟု ဆိုရပေမည်။အာရုံခံစားမှုတွင် လူသားတို့အားလုံးညီညွတ်ကြသော်လည်း ယင်းအာရုံ ခံစားမှုကို ဖော်ပြမှုပုံ သဏ္ဍန်တွင် ကား ကွဲပြားနိုင်သည်။ ခြားနားနိုင်သည်။ ရသခံစားမှု တူသော်လည်း အလှ အပ ဖော်ပြမှု ပုံသဏ္ဍန် တွင် ခြားနားနိုင်သည်။
လွတ်လပ်ရေးမြတ်နိုးသော စိတ်တွင် တူသော်လည်း လွတ်လပ်ရေးရရှိရန် ဆောင်ရွက် သော ပုံသဏ္ဍန်တွင်ကား တူချင်မှ တူကြပေမည်။ ချုပ်ချယ်မှု အတိုင်းတာပေါ်တွင် မှုတည်၍ ယင်းလွတ်လပ်မှုကို ချုပ်ချယ်ခြင်း ၊ ဖိနှိပ် ခြင်း တို့မှ လွတ်မြောက်သော လှုပ်ခြားမှု ပိုသဏ္ဍန်တွင်ကား တူချင်မှ တူကြမည်။
အတိုင်းတာ ကိုလိုက်၍ အကြီးအငယ်၊ အပျော့အမာ ကွာခြားနိုင်သည်။ ငြိမ်းချမ်းရေး မြတ်နိုးသော စိတ်တွင်ကား အာလုံးတူညီ ကြသည်။ သို့သော် ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိအောင် ကြိုးပမ်းအားထုတ် သော လှုပ်ရှားမှုပိုသဏ္ဍန် တွင်ကား တူချင်မှ တူကြမည်။ ခြားနားခြင်းမှာ လှုပ်ရှားမှု ပုံသဏ္ဍန် (၀ါ) ပုံသဏ္ဍန် တွင်သာ ခြားနားနိုင်မည်။ စိတ်ဓာတ်ချင်းတူညီသည်မှာ အမှန်ပင်။
ယင်းသို့ မတူညီသော အရာများကို ပေါင်းစပ် နိုင်ခြင်းသည် နိုင်ငံရေး ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်သည်ဟု ဆိုရမည်။ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်၏ ယဉ်ကျေးမှုတည်ဆောက်ရာတွင်ကာယ အင်အားနှင့် ဥာဏအင်အားတို့ ပေါင်းစပ်ရစမြဲ ဖြစ်သည်။ ယင်းသို့ ပေါင်းစပ်ခြင်းကြောင့်သာလျှင် ယဉ်ကျေးမှု အဆောက် အအုံ ကြိးသည် ကြိးမားလာခြင်းသာဖြစ်သည်။ ဝေးဝေးမကြည့်နှင့်။ ၁၁ ရာစုတွင် ထွန်းကားခဲ့သော ပုဂံယဉ်ကျေးမှုကိုကြည့် က သိနိုင်သည်။
ယနေ့တိုင် ကမ္ဘာပပါ အံ့သြနှစ်သက်သော ပုဂံဗိသုကာသည် မည်သို့ တည်ဆောက်ကြသနည်း။ အနုပညာရှင် ဗိသုကာတို့နှင့်ပန်းရံ ၊ အုတ်သယ် ၊ အင်္ဂတေလောင်းစသော ကာယလုပ်သားတို့နှင့် ပေါင်းစပ်၍ လုပ်ကြသည်မှာ ထင်ရှားသော သာဓက ဖြစ်သည်မှာ အမှန်ပင်။ ဗိသုကာ အနုပညာရှင်က စေတီ ပုထိုး၊ ဂူ ၊ ကျောင်း တို့၏ ပုံစံကို သူတို့၏ အနုပညာ စိတ်ကူးဖြင့် ပုံစံထုတ်သည်။ ယင်းပုံသဏ္ဍန်ကို အကောင်အထည်ဖြစ်လာရန် ဗိသုကာ တစ်ဦးတည်းလုပ်၍ မရ။ ကာယ အင်အားစုကြိးက အနုပညာအလိုနှင့် ကိုက်ညီ အောင် ပေါင်းစပ်လုပ်အားပေးမှသာ အောင်မြင်နိုင်သည်။ ပုံစံ မထုတ်တတ်သော ကာယအင်အား စု တစ်ခု တည်းနှင့် လှပသော ဗိသုကာအဆောက်အအုံ တစ်ခု ကို တည်ဆောက်နိုင်သည်မဟုတ်ပေ။ ပေါင်စပ်ကြရသည်။ ယင်း သည်ပေါင်းစပ်မှုပင်ဖြစ်သည်။ ညီညွတ်ရေးသဘော ပင်ဖြစ်သည်။
မတူသော အင်အားစုများ ပေါင်းစပ်မိလျှင် အောင်မြင်ခြင်းအထွက်အထိပ်သို့ရောက်နိုင်ပေလိမ့်မည်။
၂၅.၁၀.၉၅ (ရနံ့သစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၊၁၉၉၅)
Posted by JACBA at 7:24 AM0comments Links to this post
အမေရိကတိုက်ကို တွေ့ဖို့ မလွယ်
ခရစ္စတို ကိုလမ်ဘတ်ရဲ့အိမ်မှာ မိန်းမတစ်ယောက်ရှိနေမယ်ဆိုရင်၊ သူဟာ အမေရိကတိုက်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ခဲ့ပါမည်လား။ စဉ်းစားစရာပါ။
“ရှင်ဘယ်သွားမလို့လဲ၊ ဘယ်သူတွေနဲ့တုန်း၊ ဘာသွားလုပ်မှာတုန်း၊ ဘယ်တော့ပြန်လာမှာတုန်း” ဒီလိုမေးခွန်းတွေကို ခရီးထွက်လို့ မဖြစ်နိုင်အောင် မေးနေဦးမှာ သေချာပါတယ်။
** မြဟန်သိန်းမောင် **
Posted by JACBA at 6:51 AM0comments Links to this post
စိန်ငှက်ရိုး၏ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် သူ့ခယ်မလင်နောက်သို့ လိုက်ပြေးသွား၍ ကြက်ဖကြီး လည်လိမ်ထားခြင်းခံရသလို ခေါင်းငိုက်စိုက်ချကာ မှိုင်တွေနေသဖြင့်…
စိန်ငှက်ရိုး။ ။ “မင်းပုံစံက ဘာဖြစ်နေတာလဲကွ၊ မင်း မိန်းမ ဟိုကောင်နဲ့ ထွက်ပြေးတုန်းကတောင် မျက်နှာတစ်ချက်မှ မပျက်ခဲ့ပါဘူး။ ခယ်မ ခိုးရာလိုက်ပြေးမှ မင်းက ဘယ်လိုဖြစ်နေရတာလဲ”ဟု ပြောလိုက်မိရာ ထိုသူက ပြန်ဖြေလိုက်သည်မှာကား…
Posted by JACBA at 5:24 AM0comments Links to this post
**(စာချိုးအကျော် ဗန်းမော်ဆရာတော် စွယ်စုံပုံပြင်များ)**
ဗန်းမော်ဆရာတော်ကား စွယ်စုံပညာရှင် ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာတော်၏ စာ၊ ဆရာတော်၏ ဟောပြောချက်များကို ဖတ်ရှုလေ့လာလျှင် ဆရာတော်သည် လူ့သဘော လူ့သဘာဝကို မည်မျှ နှံ့စပ်ကျွမ်းကျင်ကြောင်း သိနိုင်ပါသည်။
တစ်နေ့တွင် ဗန်းမော်ဆရာတော်ကြီးသည် တိုက်အုပ်၊ စာချကိုယ်တော် စသည့် ရဟန်းသံဃာတော်တို့နှင့် ဆွမ်းစားပြီးနောက် ခေတ္တနားနေစဉ် ဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် တပည့်စာသင်သားကိုယ်တော်တို့အကြောင်း စကားစပ်လျဉ်းဆွေးနွေးမိကြပါသည်။
ဘယ်ကျောင်းသားက စာတော်သည်။ ဘယ်ကျောင်းသားက အဆော့သန်သည်၊ ဘယ်ဦးပဉ္စင်းက ၀ီရိယကောင်းသည်။ ဘယ်ဦးပဉ္စင်းက ဥာဏ်မကောင်း၊ နေပြည်တော်မှ ရောက်လာသောဦးပဉ္စင်းငယ်တစ်ပါးသည် ၀ီရိယနည်းသည်။ သို့သော် ရိုးရိုးကုပ်ကုပ်နေသည်စသည်ဖြင့် စာချကိုယ်တော်တို့က အမျိုးမျိုးဝေဖန်သုံးသပ်ကြသည်။ ဆရာတော်အား လျှောက်ထားကြသည်။
နောက်တစ်နေ့တွင် ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင် စာဝါပို့ချသည်။ ရိုးရိုးကုပ်ကုပ်နေတတ်ပါသည်ဆိုသော ဦးပဉ္စင်းကိုလည်း သတိထားအကဲခတ်သည်။ ထိုအခါ အနှီး ဦးပဉ္စင်းမှာ ကျောင်းတိုင်ကိုမှီ၍ အိပ်ငိုက်နေကြောင်း သတိပြုမိသည်။ သို့နှင့် ထိုဦးပဉ္စင်းကို ရှေ့သို့ ခေါ်ကာ ဆုံးမလေသည်။
“တစ်နေ့ကပဲ ငါ့ရှင်ရဲ့ ဆရာက ငါ့ရှင် ရိုးရိုးကုပ်ကုပ်နေတတ်ကြောင်း ပြောတယ်။ ခု ဆရာတော်မြင်တာ တောကြက်ကုပ်ကို ကြက်ကောင်းမှတ်သလို ဖြစ်နေပါရော့လား။”
ဆရာတော်နိဒါန်းပျိုးလျှင် နောက်ဆက်တွဲသာဓက၊ ပုံပြင်၊ စာချိုးပါလာတတ်ကြောင်း စာသင်သားများသာမက စာချကိုယ်တော်များကပါ သိရှိသည်။ ထို့ကြောင့် အားလုံးပင် တိတ်တိတ်နေကာ နားစွင့်ကြသည်။
“ရှေးက အညာရွာတစ်ရွာမှာ တိုက်ကြက်မျိုးကောင်းဖောက်ပြီးရောင်းစားတဲ့ လူတစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူက ကြက်တွေကို ဖောက်၊ မတမ်းအရွယ်လောက်ရောက်တာနဲ့ ရောင်းစားလေ့ရှိတယ်။ အရွယ်ရောက်တဲ့အထိ လက်ထဲမှာ မထားဘူး။”
ဆရာတော်၏ ပုံပြင်ကို အားလုံးကပင် စိတ်ဝင်စားစွာ နားထောင်ကြသည်။ ဆရာတော်၏ ပုံပြင်ဆုံးလျှင် မှတ်စရာ၊ နည်းယူစရာ၊ သင်ခန်းစာ၊ ဆင်ခြင်စရာ တစ်ခုခု ပါစမြဲ ဖြစ်ပေသည်မဟုတ်လော။
“တစ်ခါတော့ တိုက်ကြက်မတစ်ကောင်က ကြက်ကလေးတွေ ပေါက်လာတယ်”
ဆရာတော်က ဇာတ်လမ်းကို ဆက်သည်။
ကြက်ကလေးဆယ်ကောင် ပေါက်တယ်။ ထိုဆယ်ကောင်ထဲတွင် ထူးခြားသော ကြက်ကလေးတစ်ကောင် ပါလာသည်။ ထိုကြက်ကလေးသည် အခြားကြက်များနှင့် မရော၊ မဆော့၊ ရိုးကုပ်စွာ နေလေသည်။ ဤထူးခြားချက်ကို ကြက်ရှင်က ကောင်းစွာ သတိထားမိသည်။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင် ကြက်ရှင်က ကြက်များကို ရောင်းပစ်သည်။ သို့သော် ကြက်ကုပ်ကလေးကိုမူ ချန်ထားသည်။ အထူးဂရုစိုက်၍ မွေးသည်။
ကြက်ဖကလေးအရွယ်ရောက်လာသည်တွင် အတက်ကလေးထွက်လာသည်။ နေပုံမှာ ယခင်အတိုင်း ကုပ်ကုပ်ကလေးပင်ဖြစ်သည်။ ကြီးလျှင် အစွမ်းပြမည့်လက္ခဏာဟု ကြက်ရှင်က တွေးဆထင်မြင်သည်။
“ကျုပ်ကြက်ဖလေးက အနေကုပ်ပေမယ့် အစွမ်းပြမှာ သေချာတယ်။ အစားကလဲ ကောင်းသမျှ၊ နေပုံကလဲ- တည်တယ်၊ ကုပ်တယ်။”
ကြက်ရှင်က သူ၏ ကြက်ဖလေးအကြောင်း ကြုံတိုင်းကြွားလေ့ရှိသည်။ တစ်နေ့တွင်မူ သူ၏ ကြက်ဖလေးကို ပွဲထုတ်ရန် စီစဉ်လေသည်။
“မင်းကြက်ကုပ်ကို ခွပ်လက်လဲ မချဘဲနဲ့ ဖြစ်ပါ့မလား၊ ဒီအတိုင်းတိုက်ရင် ရှုံးမှာပေါ့”
“ငါ့ကြက်ဖက ခွပ်လက်ချစရာမလိုပါဘူးကွာ ကျိန်းသေပေါက်နိုင်မှာပါ”
ကြက်ရှင်က သူ့ကြက်ကို သူယုံသည်။ ထို့ကြောင့် ရှိသမျှ ပုံအောပြီး လောင်းကြေးထပ်သည်။
ပွဲစကတည်းက တစ်ဖက်ကြက်က မနားတမ်းခွပ်သည်။ ကြက်ကုပ်ကလေးကမူ ကုပ်ကုပ်ပင်၊ ကြက်ရှင်ကမူ သူ့ကြက်ကို အထင်ကြီးဆဲ။ တစ်ချက်ကောင်း ခွပ်မည့်ကောင်ဟု ထင်သည်။ တစ်ဖက်ကြက်က ဆက်တိုက်ခွပ်သည်။ ကြက်ကုပ်ကမူမခွပ်။ ကုပ်ကုပ်ပင်၊ တစ်ချက်ကောင်းအကွက်ချောင်းသည်ဟု ကြက်ရှင်က ထင်သည်။ နောက်ဆုံးတစ်ဖက်ကြက်၏ ခွပ်ချက်ကြောင့် ကွင်းထဲတွင်ပင် ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်နှင့် သေလေတော့သည်။
“ဒီလိုပဲ တပည့်တို့၊ တပည့်တို့ကို တကယ့်ကိုပဲ ကြက်ကောင်းဖြစ်စေချင်တယ်။ ကြက်ကုပ်လို အထင်မှားတဲ့ အဖြစ်မျိုး အဖြစ်မခံနိုင်၊ အရောက်မခံနိုင်ဘူး တပည့်တို့”
ဆရာတော်က ပုံပြင်အဆုံးတွင် စေတာနာ ဆန္ဒကိုပါမိန့်ကြားသည်။ ထို့ကြောင့် ကုပ်တိုင်းမကောင်းဟု တပည့်တို့က ရယ်မောပြောဆိုကြသည်။
** နေဘုန်းဝေ **
(စာချိုးအကျော် ဗန်းမော်ဆရာတော် စွယ်စုံပုံပြင်များမှ)
Posted by JACBA at 5:22 AM0comments Links to this post
29 Aug,10// လသာနေမဲ့ ည…
အိုးလှည်းတန်း ညရဲ့ မီးပုံ
ပုပ္ပါးတောင် ကောင်းကြောင်းရေးရေး… တွေ
ငါနဲ့မင်း (ထီးဆိုင်)ရဲ့ ဆင်းရဲသားအတွေးနဲ့
ခေတ်ဆိုးကို ဆေးကြောပစ်ဖို့ လိုကိုလိုအပ်ကြောင်း
ကိုယ်တိုင်ရဲ့ မရေရာမှုကြားက ခွန်အားနဲ့နွေးထွေး
အလုပ်သမား လူငယ်လေးတွေရဲ့ ရင်ဟာ
ငါတို့ရဲ့ ညီမလေး နီနီအောင် လဲ
တပြိုက်နက် ဆက်လက်လှပ နေမှာ
ငါတို့ကိုတော့ သိကြတော့မယ် မထင်ပါဘူးလေ
မြစ်ရေတွေက ဗြောင်းဆန်အောင် စီးဆင်းခဲ့ကြပြီဘဲ။
ငါ (တို့) ဖြတ်သန်းချင်ကြသေးတယ်
လ သာဖို့တော့ လိုလိမ့်မယ်။
(သူငယ်ချင်း လှဒေါင်းနဲ့ မိတ္ထီလာဆောင်းည… သို့)
Posted by JACBA at 5:20 AM0comments Links to this post
ဒေါ်စုမှ ဦးဥာဏ်ဝင်းသို့ မှာကြားချက်
၁။ NLDမပါလို့ဘယ်သူ့ကိုမဲထည့်ရမလည်းဆိုရင် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပါတီမပါရင်
၂။ ပြည်ပသတင်းတွေမှာကော ပြည်တွင်းစာနယ်ဇင်းတွေမှာပါ ပြည်သူတွေနားမလည်တာကို
၃။ ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်းဌာနမှာ ရန်ပုံငွေနည်းနေတဲ့အတွက် ရပ်တည်ရခက်နေတာကို
၅။ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ အခုထွက်နေတဲ့ဥပဒေတွေကို နားလည်းရမယ်
၆။ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတို့ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတို့နဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးမသာမာမှုတွေရှိရင်
ပြည်သူတွေအနေနဲ့ တရားစွဲရမယ် ရဲစခန်းကိုတိုင်ရမယ်။
၇။ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပက်သက်ပြီး သတင်းရယူခွင့် ၊သတင်းထုပ်ပြန်ခွင့် မရှိဘူး
၈။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအရေ၏၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲကိုလုပ်တယ် အဲ့ဒီကထွက်လာမယ့် သမတ
မလွမ်းမိုးနိုင်ဘူး သမတ ကပဲအားလုံးကိုလွမ်းမိုး
၉။ အခုထွက်နေတဲ့ဥပဒေတွေက တရားမျှတမှုမရှိဘူး အဲ့ဒါတွေကိုတောင် မလိုက်နာနိုင်ရင်
Posted by JACBA at 7:05 PM0comments Links to this post
ဦးကြည်မောင်နှင့် အမှတ်ရစရာ ပုံရိပ်လွှာအချို့… (အပိုင်း-၄)
ဦးကြည်မောင်ဟာ ဦးအောင်ကြီးရဲ့ ၁၃-ဦးအုပ်စုကနေ လမ်းခွဲထွက်လာပြီး အန်အယ်လ်ဒီထဲမှာပဲ ဆက်လက်ရပ်တည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဦးအောင်ကြီးကတော့ `မြို့မေတ္တာ ခံယူမယ့် သားပေမို့´ ဆိုသလို ပြည်ထောင်စု အမျိုးသားများဒီမိုကရေစီပါတီ(UNDP)ကို သီးခြားတည်ထောင်ပြီးတော့ ဥက္ကဌလည်းမဟုတ်၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်နာယကလည်းမဟုတ်ပဲ `ဦးစီးနာယက´တဲ့ဗျာ။ ဟုတ်ကဲ့…။ အဘိဓမ္မာတောင်သာ (သမားတော်ဂိုဏ်းကြီး)လိုလို၊ ပင်မသိုင်းအဖွဲ့ကြီးလိုလို အဖွဲ့အစည်းကြီးကလို့ ထင်ရပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ပရိယတ္တိသာသနာကို ဖြန့်ဝေပေးနေတဲ့ ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်တွေမှာလည်း `ဦးစီးနာယက´ဆိုတာ ရှိတယ်လေဗျာ။
ဟုတ်ကဲ့ပါ…။ ဦးအောင်ကြီးက `ဦးစီးနာယက´။ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်း ဦးကျော်မြင့်လေးက ဥက္ကဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဌ- ပါမောက္ခဟောင်း ဦးသာထို၊ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး-ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်း ဦးကြည်ဟန်၊ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးများအဖြစ် ဂုဏ်ထူး-ဦးသိန်;်နိုင်(ဂုဏ်ထူး မြန်မာစာ ကျူရှင်ဆရာကြီး)။
အမှုဆောင်တွေထဲမှာ- ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်း ဦးခင်ညို။ ပါမောက္ခဟောင်း ဒေါက်တာ ဒေါ်သင်းကြည်၊ ဦးသန်းကြွယ်၊ ဦးဘိုးအောင်၊ ဗိုလ်မှူးထွန်းရှိန်၊ အမ်အေ ဒေါ်အုန်း(မန္တလေး) (စာရေးသူဟာ ဒီလောက်ပဲ မှတ်မိပါတယ်။ ဖြည့်စွက်ကြပါကုန်)
ခံစားတင်ပြသူ- သောင်ရင်းနဂါး (မြန်မာပြည်သား)
Posted by JACBA at 6:50 PM0comments Links to this post
Posted by JACBA at 7:08 AM0comments Links to this post
မီိဒီယာတွေရဲ့  တာဝန်ကျေပွန်တာတွေနဲ့ ဖြုတ်ထုတ်သတ်လုပ်မှ အေးမည့်မီဒီယာ
၂၀၀၈ ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံအရ ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အစိုးရကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သုံးသပ်ပြလိုက်ပါသည်။ စစ်ရေးကျွမ်းကျင်သော သမ္မတကလွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်နေသော ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေမို့ မည်သည့်နည်းနှင့်မျ လွှတ်တော်မှာအာဏာမရှိ။ ထိမ်းချုပ်၍မရ။ ထို့ကြောင့် တရားမျှတမှူမရှိသော ဥပဒေကို လက်ခံကျင့်သုံးသူများကို မင်းမဲ့စရိုက်များ (Anarchy )ဟု ပြောပြလိုက်သေးသည်။ ကျင့်သုံးသူကော လက်ခံသူကိုကော ထောက်ခံသူကိုရော မသိနားမလည်သူကိုပါ ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းဖွဲ့စည်းပုံအကြောင်းကို ဂဂဏဏသိရှိသောသူတို့က ပြောဆိုသောကြောင့်လည်း ဤဖွဲ့စည်းပုံကို အကောင်အထည်ဖေါ်မည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအား လက်မခံ ၊ သပိတ်မှောက်ကြဟု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ကြေညာလိုက်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သပိတ်မှောက်ကြရမည့်အကြောင်းကိုလည်း ပြောကြဆိုကြရတော့မည်မဟုတ်ပါလေလား။ သည်တော့ရှင်းပြီဟုထင်သည်။ သို့သော်မရှင်းသေးပါ။ အင်မတန်စိတ်ပျက်စရာကောင်းသော အခြေအနေများတွင် ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေ ပြည်ပမှာပါ ပြည်တွင်းမှာပါ စိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြရပါသည်။ ယင်းမှာမီဒီယာသမားများကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများက ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်သည်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က သပိတ်မှောက်သည်ဟု ပြောဆိုနေကြသံမှာ တိတ်ဆိတ်နေရလောက်အောင်ဖြစ်နေရသည်။ ဤသည်မှာကောင်းသော လက္ခဏာမဟုတ်။ ကျွန်တော်ဗွီအိုအေ၏ ၀ပ်ဆိုက်ကိုဖွင့်ကြည့်ပါသည်။ တွေ့နေမြင်နေရသည်မှာ ၂၀၁၀ ပွဲစားလေလံတင်နေသူ ဒေါက်တာခင်ဇေါ်ဝင်းကို ဗျူးနေသော ရုပ်သံအစီအစဉ်ကို တွေ့နေရသည်။ ယင်းမှာဒီမိုကရေစီအင်အားစုများအား စိတ်ပျက်စေနေသော ပုံမျိုးဖြစ်နေသည်။ ဒေါက်တာခင်ဇေါ်ဝင်းမှာ စစ်အစိုးရ၏ရွေးကောက်ပွဲ့ကို ပြည်တွင်းတွင် သေသေချာချာ တင်ပြနိုင်သောသူဖြစ်ပါသည်။ သူ့မှာမည်သို့မျအန္တရယ်မရှိချေ။ အခြားသောဒီမိုကရေစီအင်အားစုများမှာ မီဒီယာမရှိ။
ရုပ်မြင်သံကြားမရှိ။ အင်မတန်မှအခက်အခဲရှိနေသော ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတို့၏အခြေအနေကို လူတိုင်းသိရှိကြပါသည်။ ကျွန်တော်တို့မြင်ချင်တွေ့ချင်သည်မှာ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများက ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ကြောင်း ကျားကျားယားယား အံကြိတ်ပြောဆိုနေသော အတိုက်အခံသမားများတွေကို မြင်ချင်တွေ့ချင်သည်။ ညောင်ညာညာနှင့် မျက်နှာသေပုံမျိုးဖြင့် မုဒိမ်းမှူကျူးလွန်ထားသော သူများလိုရုပ်မျိုးနှင့် တရားခွင်မှာ အစစ်ဆေးခံနေသောသူတွေလို ဒီမိုကရေစီအင်အားစု အတိုက်အခံသမားတွေကို မမြင်ချင် မတွေ့လို။ နောက်တခါမီဒီယာတွေ အသံလွှင့်ဌါနတွေမှာ ထုတ်လွှင့်ရေးသားမှူများကလည်း မည်သို့မျသတင်းအတိအကျ ခိုင်မာမှူမရှိဘဲ ရေးသားထုတ်လွှင့်ရေးသားနေကြသည်မှာ စိတ်ပျက်စရာဖြစ်သည်။ လူမျိုးစုများနှင့်ပါတ်သက်၍ ရွေးကောက်ပွဲများကို လွှင့်ချင်သည်ဆိုလျင် သန်းခေါင်စာရင်းနှင့် လူဝင်မှူကြီးကြပ်ရေးဌနနှင့်မှတ်ပုံတင်ဌါနသို့ ယင်းလူမျိုးစုများရှိမရှိ မမေးမစမ်း။ ပြည်နယ်တခုစီတွင် ရှိနေကြသော လူမျိုးစုနွယ်စာရင်းတွင် ပါဝင်ပါတ်သက်နေမှူရှိမရှိ။ သမိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များဖြင့် ရှိနေသောလူမျိုးစုနွယ်များဖြင့် ရပ်တည်နေသည့်လူမျိုးစုများဟုတ်မဟုတ် မစုံစမ်းမလေ့လာ၊ သမိုင်းပညာရှင်များ၊ သမိုင်းသုတေသီများကို မတိုင်ပင် ။ မလေ့လာ၊ လမ်းဘေးမှ ပေါက်ကရလေးဆယ် တွေ့နေသူများကို မေးမြန်းပြီး သတင်းတွေ ပေါ်ပင်ထုတ်လွှင့် ရေးသားနေကြသည်။ လွန်ခဲသောနေ့က RFA မှာကြားလိုက်ရပါသေးသည်။ ယင်းမှာယခုတကြိမ်တည်းမဟုတ်။
ရပ်တည်ချက်များကို ပြောသွားသည်။ သည်တော့မည်သူကမှန်နေပါသနည်း။ RFA ကမှန်နေပါသလား။ မျိုးရန်နောင်သိမ်းကဘဲ မှန်နေပါသလား။ ကန့်ကွက်သူကျွန်တော်ကဘဲ မှန်နေပါသလား။ ဤမေးခွန်းကို ယခု မျိုးရန်နောင်သိမ်းကဘဲ မနေ့ကဘဲ အဖြေပေးသွားပါပြီ။ ယင်းမှာရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ရန်မှအပ အခြားရွေးစရာလမ်းမရှိတော့ပါဟု မျိုးရန်နောင်သိမ်းက ပြည်သူသို့ပန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်သွားပါပြီ။ မျိုးရန်နောင်သိမ်းမှာ ၈၈ မျိုးဆက်သစ်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဖြစ်၍ ကျွန်တော်ပိုပြီးလေးစားသွားပါသည်။ ကွန်ဂရက်ကျူးလေးရှင်းပါ ကိုမျိုးရန်နောင်သိမ်းဟု ပြောဆိုလိုက်ရပါသည်။ နောင်ကိုကျွန်တော်တို့နှင့် လက်တွဲ၍ရသွားပါလိမ့်မည်ဟုထင်ပါသည်။ ဤသည်မှာမီဒီယာတွေ၏အခန်းကဏ္ဍတွေမှာ မည်မျအရေးကြီးနေပုံကို ဆောင်းပါးရှင်ကိုယ်တိုင်က နိုင်ငံရေးမီးမောင်းထိုးပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ငါးသလောက်ပမာ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် မီဒီယာတွေနှင့် ပါတ်သက်၍ ဆောင်းပါးတပုဒ်ကို ရဲဘောကျော်သန်းမှ ရေးသားသည်ကို ဖတ်ရပါသည်။ နိုင်ငံရေးစာပေအနှစ်သာရများစွာဖြင့် ရေးသားထားသော ယင်းဆောင်းပါးမှာ နိုင်ငံရေးလောက၌ သိထားသင့်သော လိုက်နာသင့်သော အချက်အလက်များဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် တော်လှန်ရေးတရပ်အောင်မြင်မူ၊ နိုင်ငံရေးအခန်းကဏ္ဍ
ရေဒီယိုများနှင့် စကားအခြေအတင်ပြောကြသောအခါ ကျွန်တော်။ ကိုထွန်းအောင်ကျော်။ ရဲဘော်ကျော်သန်း၊ ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မိုးသီးဇွန်တို့မှာ အထူးစကားပြောနိုင် အင်တာဗျူးပြောနိုင်သူများဖြစ်သည်။ သို့သော် ရွေးကောက်ပွဲသပိတ်မှောက်မည့်အကြောင်းများနှင့် မည်သည့်အခါမျ မပြော။ မဆွေးနွေး။ အင်တာဗျုးမပြုလုပ်ရ။ ဆိုးနေသည်က ကျွန်တော်တို့မှာ ဘလော့တွေ ။ ၀ပ်ဆိုက်တွေမှာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ဆောင်းပါးရေးနေသူများဖြစ်ရာ မည်သည့်အတွက်ကြောင့်များ အင်တနာဗျူးတချက်တလေ မပြုလုပ်လေသနည်းဟုလည်း စဉ်းစားစရာဖြစ်နေပါသည်။ ဘလော့တွေကို ၀ပ်ဆိုက်တွေကို မီဒီယာရေဒီယိုသမားတွေကများ တမင်မဖတ်ကြလေသလားမသိ ။ တခါတခါ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူ၊ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလေ့လာသူ၊ စစ်ရေးအကဲခတ် စသည်ဖြင့် အဓိပ္ပါယ်မရှိ နာမည်ကင်ပွန်းတပ်ကာ အင်တာဗျူးလုပ်နေသံတွေကိုလည်း ကြားနေရသည်မှာ တကယ့်နားမုဒိမ်းကျင့်ခံနေရသည်နှင့် တူနေသည်။ ရေဒီယိုတွင် သတင်းထောက်လုပ်နေသူများမှာလည်း တော်လှန်ရေးလောက နိုင်ငံရေးလောကမှ ထွက်လာသူများဖြစ်ရာ နိုင်ငံရေးသမားများကို အင်တာဗျူးပြုလုပ်ကြသည့်အခါ ဘက်လိုက်တာတွေကလည်းရှိနေသည်။ သူတို့ကိုထမင်းကျွေးထားသူများဆိုလျင်တော့ ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ် မိုက်ခွက်ကလေးတော့ ပေးပြီးသား။ အဆိုးဆုံးကတော့ အကယ်၍ဆန္ဒပြနေသည်ဟုဆိုလျင်ပင် ပြနေသည့်နေရာကိုမျှ မသွားဘဲ တယ်လီဖုံးကလေးဖြင့် မေးစမ်းပြီးအင်တာဗျူးလုပ်ကာ အသံလွှင့်ပေးနေခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းမှာအခန်းအနားကိုပြုလုပ်သူက မည်သူဆိုရုံမျနှင့် လုံလောက်နေသလို အင်တာဗျူးလုပ်ခြင်းနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဆန္ဒပြနေရာမှာ ၊ အခန်းအနားတွေမှာ မည်သူကမည်သို့ စစ်အစိုးရနှင့် ပါတ်သက်၍ ပြောပြချက်များ၊ တင်ပြချက်များ၊ ပေါ်လီစီများကို အကောင်းဆုံးဟောပြောနေပေမင့် အခန်းအနားဆောင်ရွက်သူကိုသာ အင်တာဗျူးပြုလုပ်နေမူမှာ မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီလောကမှ ယဉ်ကျေးမူတရပ်ဖြစ်နေသည်။ သည်တော့ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ ၊အခန်ူအနားတွေမှာ အာပေါက်အောင်ပြောနေသောနိုင်ငံရေးသမားတို့မှာ ငယ်သံပါအောင်အော်ပြောနေသော်လည်း သူတို့အသံကို ပြည်သူတို့မကြားလိုက်ကြရ။ ပြည်သူတို့ကို စိတ်ဓါတ်ခွန်အား မပေးလိုက်ကြရ။ နိုင်ငံတကာသတင်းထောက်များမှာတော့ စစ်မြေ်ပြင်ဆင်းပြီး သတင်းထောက်များကို မြင်တွေ့နေရသည်။ နိုင်ငံကတကာလမ်းမပေါ်မှာ ကြွေးကြော်ဆန္ဒပြနေကြသော လူအုပ်စူရှိရာသို့ ကျွန်တော်တို့ဇတ်လိုက်ကျော် သတင်းထောက်များ၊ ဂျာနယ်သတင်းထောက်များမှာ နေအိမ်မှ၎င်း။ ရုံးခမ်းမှ၎င်း အင်တာဗျူးလုပ်ပြီး သတင်းတွေထုတ်လွှင့်နေကြသည်မှာ ရွံစရာကြီးဖြစ်ပါသည်။ ကိုထွန်းအောင်ကျော် ပြောသလို စစ်ဖြစ်နေချိန် ရေဒီယိုများမှ စစ်နိုင်သတင်းများကို လွှင့်ပေးနေရချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့သတင်းထောက်တွေ မီဒီယာတွေ ဘယ်လိုလုပ်သင့်ပါသလဲဆိုတာ စဉ်းစားစရာဖြစ်လာပါသည်။ မှန်ပါသည်။ ကိုထွန်းအောင်ကျော် ပြောသလို ပြည်သူနှင့် စစ်အုပ်စုတို့စစ်ဖြစ်နေကြပါသည်။ ယင်းအချိန်မှာမီဒီယာတွေကို ကျွန်တော်တို့ဖက်က အားကိုးချင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ကပြောသော လွှင့်သော ရေးသော အကြောင်းအရာများကို ပြည်သူများအားသိစေချင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့၏ပြည်သူများအား ပြောကြားရေးသားခြင်းကို ဘက်လိုက်ပြီးပြုလုပ်သင့်သည်။ အကယ်၍ဘက်မလိုက်လိုလျင် ဘက်မလိုက်သော သတင်းဌါနများ၊ဂျာနယ်များတွင် သွားလုပ်ကြခြင်းက ပို၍ကောင်းသည်လို့ထင်ပါသည်။ မည်သည့်အတွက်ဆိုလျှင် သူတို့ကိုယ်တိုင်ပင် နိုင်ငံရေးသမား တော်လှန်ရေးသမားဟု ဘက်နှစ်ဘက်စလုံးက ပြောဆိုနေကြ၍ဖြစ်သည်။ သည်တော့
မည်သည့်ဖက်သို့ယိမ်းကြမည်နည်း။ ဒီမိုကရေစီအတိုက်အခံအင်အားစုဖက်က ရပ်တည်လျင် ဒီမိုကရေစီအင်အားစုဘက်က ဆန္ဒကိုလေးစားဖို့လိုသည်။ ထို့ကြောင့် ဒီမိုကရေစီတိုက်အခံအင်အားစုတို့၏ မီဒီယာဘက်က ရပ်တည်ပေးရန်လိုသည်။ အကယ်၍တကယ့်မီဒီယာသူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို စစ်စစ်ပေါက်ပေါက် သတင်းထောက်တွေ လုပ်ကြပြီဆိုလျင် ဆန္ဒပြရာဆီသွာြး့ပီး သတင်းယူသတင်းပို့လုပ်ကြ၊ ဂျာနယ်သမားတွေကဆိုလျင်လည်း ၀တ္ထုတွေ၊ဆောင်းပါးတွေ၊ ကဗျာတွေ ၊ ရေးတတ်သူတွေက ဂျာနယ်တွေမှာ အယ်ဒီတာတွေလုပ်ကြ၊ သတင်းဌါနတွေမှာ တတ်သူက ဥက္ကုဌလုပ်ကြ။ သည်လိုမျိုးမီဒီယာတွေ ဖြုတ်ထုတ်သတ်လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်က ကျွန်တော်တို့မှာကိုယ်ပြောချင်ရာကိုလည်းမပြောရ၊ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ကြပါဟု ပြည်သူတွေကိုလည်း မစည်းရုံးရ။ မတိုက်တွန်းရနှင့် ရွေးကောက်ပွဲကြီးပြီးစီးသွားသည်ကို လက်ပိုက်ကြည့်နေရမည့်ဘ၀ ရောက်နေပါပြီ။ စစ်အစိုးရမှာ မီဒီယာနှင့် ပါတ်သက်၍ ရေဒီယိုရှိပါသည်။ ရုပ်မြင်သံကြားရှိပါသည်။ သတင်းစာတွေရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့မှာမီဒီယာအားကောင်းလွန်းလှပါသည်။ ကျွန်တော်တို့မှာ RFA,DVB နှစ်ခုသာအားကိုးစရာရှိပါသည်။ ဤနှစ်ခုက ပညာသည်ကြီးလုပ်နေတာကို ပညာသည်ကြီးတွေက လက်လျှိုခံကြပြီဆိုမှဖြင့် မီဒီယာကိစ္စကို ဖြုတ်ထုတ်သတ်လုပ်မလားဆိုသော ဒီမိုကရေစီမဲပေးစနစ်အရ ဆုံးဖြတ်ရတော့မည့် အနေအထားရောက်နေပြီလားဟု မေးခွန်းတွေထွက်ပေါ်နေပါပြီ။ ဤအသံကိုကြားနိုင်ကြပါစေဟုလို့တော့ ပြောချင်ပါသည်။
** ခိုင်အောင်ကျော် ( နယူးယောက် )**
Posted by JACBA at 6:54 AM0comments Links to this post
ဗန်းမော်ဆရာတော်က စွယ်စုံပုံပြင် ဆရာကြီးလည်း ဖြစ်တော်မူပေသည်။ ဆရာတော်ကြီး စစ်ကိုင်းချောင်တွင် သီတင်းသုံးစဉ် ဆရာတော်၏ ကျောင်းတွင် တောထွက်ဦးပဉ္စင်းကြီးတစ်ပါး ရှိလေသည်။ တစ်နေ့တွင် ထိုဦးပဉ္စင်းကြီးသည် ကျောင်းသားငယ်တစ်ဦးအား ငေါက်ငမ်းနေသည်ကို ဆရာတော်ဘုရားကြီး ကိုယ်တိုင်ကြားလေသည်။ ထို့ကြောင့် ဦးပဉ္စင်းကို ချက်ချင်း ခေါ်ယူလေသည်။
“ငါ့ရှင် ခင်ကြီး၊ သင်္ကန်းဝတ်ထားပါလျက် ဘာကြောင့် ဆဲရေးတိုင်းထွာနေရသလဲ။ ရဟန်းဆိုတာ ခုလို ညစ်ညမ်းကြမ်းတမ်းစွာ ဆဲတာမဆိုထားနဲ့ ဆဲရေးခြင်းဆယ်ပါးတွင် တစ်ခုခုပါဝင်တာနဲ့ အပြစ်အာပတ်သင့်ပေတယ် ငါ့ရှင်”
**မှတ်ချက်။ ။ ဆဲရေးခြင်း ဆယ်ပါး**
၁။ ။ ဇာတိ- - သာကီယမျိုး၊ စဏ္ဍာလမျိုး စသည်ဖြင့် ဇာတ်ကို ထိပါး၍ ဆဲရေးခြင်း။
၂။ ။ နာမ- - အမည်နာမတို့ဖြင့် ထီပါးဆဲရေးခြင်း၊ (ဦးမျိုးယုတ်၊ ဦးဥာဏ်ပြူး စသည်)
၃။ ။ ဂေါတ္တ- - နေမျိုးနွယ် ပုဂံပြည်သဗညုဆက်၊ ရွှေစည်းခုံနွယ်စသည်ဖြင့် အနွယ်ကို ခိုက်၍ ဆဲရေးခြင်း၊
၄။ ။ ကမ္မ- - အလုပ်အကိုင်ကို ခွဲ၍ ဆဲရေးခြင်း၊
၅။ ။ သိပ္ပ- - အတတ်ပညာကို ခွဲ၍ ဆဲရေးခြင်း၊
၆။ ။ အာဗာဓ- - ရောဂါအနာကို ထိခိုက်၍ ဆဲရေးခြင်း၊ (မီးယပ်ပိန် မီးယပ်ခြောက်၊ ဖိုးကြာ၊ ရှိုက်ကုန်း စသည်)
၇။ ။ လိင်္ဂ- - အသွင်ကို စွဲ၍ ဆဲရေးခြင်း၊ (ဂျပု၊ လန်ဘား၊ ဂွတို စသည်)
၈။ ။ ကိလေသ- - ကိလေသာတစ်ပါးပါးအမည်ကို စွဲ၍ ဆဲရေးခြင်း၊ (တဏှာအိုး၊ ဒေါသကုမ္မာ၊ ဏှာဘူး စသည်)
၉။ ။ အာပတ္တိ- - အာပတ်အမည်ကို စွဲ၍ ဆဲရေးခြင်း၊
၁၀။ ။ အက္ကောသ- - နင့်အမေနှင့် နှမ၊ ခွေးမသား စသည်ဖြင့် ဆဲရေးခြင်း၊ (အယုတ်အမြတ်အားဖြင့် ၂- ပါးစီရှိသည်။ မဟော်သဓာ ဘုရားလောင်းစသည်ဖြင့် မတန်မရာနှိုင်းခြင်းသည်လည်း ထိပါးခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။
၂။ ။ အာပတ်- - အာပတ် ၇- ပုံ ရှိသည်။ ရဟန်းတော်များအတွက် ၀ိနည်းပညတ်ချက်လာ အခြေခံဥပဒေကြီး ၇-ပုံ ရှိသည်။
“သည်းခံတော်မူပါဆရာတော်ဘုရား၊ တပည့်တော်မှာ ရဟန်းဘောင်ဝင်တာမကြားသေးတဲ့အတွက် လူဝတ်ကြောင်ဘ၀တုန်းကလိုပဲ ဆဲရေးမိတာပါဘုရား။ ရဟန်းဆိုတာ သတိရတော့မှပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကိုယ်ဆုံးမရပါတော့မယ် ဘုရား”
“ဦးပဉ္စင်းကြီး ခုပြောတာက ထန်းတောရွာက ဇာတ်ဆရာမောင်ဟိန်း ဘီလူးကြိမ်းမှားသလို ဖြစ်နေပြန်ပါပြီ”
“မောင်ဟိန်းအကြောင်း မိန့်ကြားတော်မူပါဦး ဘုရား”
အပါးရှိ ရဟန်းအပေါင်းတို့က တောင်းပန်လျှောက်ထားကြသည်။
“ထန်းတောရွာမှာ မောင်ဟိန်းဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်ရှိတယ်။ ရုပ်သေးဇာတ်ထောင်ပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုတယ်။ အခန်းအားလုံးကျရာ သေတ္တာမှောက်ကတတ်တယ်ပေါ့ကွယ်”
ဆရာတော်ကြီးက ရုပ်သေးဇာတ်ဆရာမောင်ဟိန်းအကြောင်းကို ဟောကြားလေသည်။
မောင်ဟိန်းသည် ဇာတ်ဆရာလည်း ဖြစ်သည်။ ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို ကပြနိုင်သူ သေတ္တာမှောက်လည်းဖြစ်သည်။ တစ်ည အညာရွာတစ်ရွာတွင် ဇာတ်ကခိုက် ဖြစ်ပါသည်။
ထိုညက ၀ိဇယဇာတ်ထုပ်ကို ခင်းသည်။
ဇာတ်ဆရာ မောင်ဟိန်းလည်း ၄င်းအလှည့်မတိုင်သေးသဖြင့် မှိန်းစက်အိပ်ပျော်သွားသည်။ သန်းခေါင်သို့ရောက်လေပြီ။ ဘီလူးမင်းကြီး ထွက်ခန်းရောက်လေပြီ။
“ဆရာကြီး၊ ထ- ထ ဘီလူးမင်းကြီး ထွက်ခန်းရောက်ပါပြီ။”
မောင်ဟိန်းလည်း အိပ်ရာမှထသည်။ အိပ်မှုန်စုံမွှားနှင့် သိကြားရုပ်ကို ဘီလူးရုပ် ထင်မှတ်ကာ ကိုင်ဆွဲ၍ ထွက်သည်။
“ငါဟဲ့ ယောင်္ကျား၊ ယက္ခဒီပအစိုးငယ်ရသည့်…”
မောင်ဟိန်းက ကြိုးဆွဲရာကနေ ဘီလူးကြိမ်းကြိမ်းလေသည်။
“အလို- ဆွဲတာက သိကြားရုပ်၊ ကြိမ်းတာက ဘီလူးကြိမ်းပါလား။ ဇာတ်ဆရာ ဆရာဟိန်းတော့ လွဲပြီ”
အောက်မှ ပွဲကြည့်ပရိသတ်၏ ဝေဖန်သံက ပေါ်ထွက်လာသည်။ ဤတွင်မှ ဇာတ်ဆရာက အရုပ်ကို ငဲ့ကြည့်လိုက်သည်။ သိကြားရုပ်မှန်းသိသည်။
“သယ်- ငါဟဲ့ ယောင်္ကျား သိကြားဘီဘူးအမည်ထူးနဲ့…”
အရုပ်နှင့်ကိုက်အောင် ချက်ချင်း ပြင်ရွတ်လေသည်။
“အင်း- ဦးပဉ္စင်းကြီးလဲ ရှေးလူဖြစ်စဉ်ကလို မှတ်ပြီး ဇာတ်ဆရာမော်ဟိန်းလို ဘီလူးကြိမ်းလွဲပုံရတယ်။”
ဆရာတော်၏ စကားအဆုံးတွင် အားလုံးပင် ရွှင်ပြုံးစွာ ရယ်မောကြလေသည်။
Posted by JACBA at 6:27 AM0comments Links to this post
စစ် တောင်နံရံကို ရိုက်ခွဲ
နှင်းထဲက စိန်ခေါ်သံ ငါတို့ အောင်ပွဲခံရမယ်။
တိုင်းပြည်ရဲ့ နုပျိုပြီး အဘိုးတန်တဲ့
လူထု တွေ ရှိနေခဲ့တယ်ဆိုတာ
အနာဂတ်စာရင်းမှာ ခပ်ရှင်းရှင်း မြင်ရမယ်။
ယဉ်ကျေး ပြီးတော့ မြင့်မြတ်
ဖက်ဆစ် ဆိုတဲ့ စကားလုံး
(စစ်မြေပြင်အသီးသီးမှ ရဲဘော်များနှင့် ထောင်တွင်းမှ သူငယ်ချင်း ရဲဘော် ဒေါက်တာဇော်မင်းသို့)
နောက်တစ်နေ့ မနက်စောစောမှာ အင်တာနဲ့ အက်သလက်တီကို -ချန်ပီယံလုကြပြီ…
မြန်မာစံတော်ချိန် 1:15 Am အင်တာမီလန်- အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်
လူကုန်ကူးခံရသည့်မြန်မာအလုပ်သမငယ်အားထိုင်းနှင်ံ့ မြန်မာ အထူးတပ်ဖွဲ့တို့ ကစုပေါင်းကယ်တင်
မြန်မာအစိုးရ၏နယ်စပ်ဒေသလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးအထူးထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ မှ ထိုင်းလူကုန်ကူးမှုတိုက်
ဖျက်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ သို့ သတင်းပေးပို့ အကူညီတောင်းခံမှုကို ထိုင်းတာဝန်ရှိသူများကအရေးတယူချက်ခြင်း
ဆောင်ရွက်ခဲ့သဖြင့် လူကုန်ကူးခံရသည်မြန်မာအမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးအားကယ်တင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ထိုင်းTV၃
လိုင်းမှ ယမန်နေ့ နှင့်ယနေ့ တွင်ထုတ်လွှင့်ပြသွားသည်။
လူကုန်ကူးခြင်းခံရသော အသက် ၂၇နှစ်အရွယ် မဖြူဖြူ၏ဓါတ်ပုံနှင့်သတင်းအချက်အလက်များအားမြန်မာ
လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ က၊ထိုင်းဘက်အခြမ်းသို့ ပေးပို့ ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းအစွန်ဆုံး ချမိုင်ကိုလုတ်ဘူးတာတွင်ကိုနိုင်ဆိုသူုကလာကြိုပြီး၊ဘန်ကောက်သို့ တက်မည့် အမြန်မမီးရထားတွဲအမှတ်၁၇၁တွင်စီးနင်းလိုက်ပါလာကြောင်းထိုင်းလူကုန်ကူးသူများကွန်ယက်ဖြန့် ကျက်လိုက်လံရှာဖွေခဲ့သည်။တွေ့ ရှိစဉ် ဖြူဖြူမှာ မူးဆေးထိ၍မူးဝေနေကြောင်း
များက သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေရဲဌာနများသို့ အကြောင်းကြားခဲ့သည်။ နယ်မြေရဲဌာနများကလည်း မီးရထားတွဲလုံ
သို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း သတင်းတွင်ဖေါ်ပြထားသည်။တိုင်းခရိုင်နယ်မြေ ၉ အထူးထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့က ဇွန်လက မြန်မာအမျိုးသမီး၅ဦးအားလူကုန်ကူးမှုမှကူညီပေးခဲ့ကြောင်း၊များမကြာမီအချိန်အတွင်းကလည်း အသက်၁၅နှစ်အရွယ်မြန်မာမိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးအားအားကူညီပေးခဲ့ကြောင်းဖေါ်ပြသွားသည်။
လူကုန်ကူးသည့်အဖွဲ့ များသည် ခွဲခြားမရနိုင်လောက်အောင် စာရွက်စာတမ်းအတုများအားလုပ်ဆောင်ပြီးထိုင်း
နိုင်ငံအတွင်းသို့ လူကုန်ကူးနေကြောင်း၊ထို့ အပြင် မူးယစ်ဆေးဝါးများလည်းသယ်ဆောင်နေကြောင်း၊ထိုသို့ အ
တုလုပ်ပေးသည့်နေရာဌာနတို့ အားအထူးစုံစမ်းလေ့လာနေကြောင်းအထူးတပ်ဖွဲ့ ကိုကိုးကား၍TV၃ကထုတ်လွှင့်ပြသသွားသည်။
Posted by JACBA at 7:15 PM0comments Links to this post
ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောပေါ်က သင်္ဘောသားတစ်သိုက်ဟာ မြို့တစ်မြို့ရဲ့ ဆိပ်ကမ်းကို မကြာမီဆိုက်ကပ်ရတော့မှာဖြစ်လို့ အရမ်းပျော်ရွှင်နေကြတယ်။ ခွင့်မယူဘဲ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတာ တစ်နှစ်လောက်ကြာသွားခဲ့ပြီ။
“လောင်းကြေးစားကြေးလုပ်မယ်ဟေ့… ဆိပ်ကမ်းပေါ်ရောက်ပြီး၊ ဆယ်မိနစ်အတွင်းမှာ ငါ့ရဲ့လက်မောင်း တစ်ဖက်တစ်ချက်ဆီမှာ မိန်းမချောလေးတစ်ယောက်ဆီ ရှိနေရမယ်ကွာ”
“သွားစမ်းပါကွာ၊ ဒီလောက်မြန်အောင် ထိုးပေးနိုင်မဲ့ ဆေးမင်ကြောင် ဆရာမရှိသေးပါဘူး”
Posted by JACBA at 6:21 AM0comments Links to this post
** (Public Health) **
အခုလို မိုးကာလမှာ `ခြင်´ပေါက်ပွားမှုအများဆုံးဖြစ်တာမို့လို့ `သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ´ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဟာ သွေးလွန်တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို သယ်ဆောင်လာတဲ့ `ခြင်ကျား၊ ခြင်းပုန်း´စတာတွေအကိုက်ခံရတာကနေ ကူးစက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဟာ များသောအားဖြင့် အသက် (၁၅)နှစ်အောက် ကလေးတွေမှာ အဖြစ်များပေမယ့် အခုအခါမှာတော့ လူငယ်၊ လူကြီးမရွေး ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
** ခြင်ကိုက်ခြင်းကြောင့်ခံစားရတာတွေက **
ခြင်ကျား၊ ခြင်ပုန်း၊ အကိုက်ခံရလို့ =
မျက်စိနောက်နား - နာကျင်သွား
ကိုယ်လက်တွေများ - ကိုက်ခဲသွား
ယား… ယား… ယား…´
ဆိုလိုတာက ခြင်ကိုက်ခံရသူဟာ - (၁) ရုတ်တရက်ဖျားမယ်၊ (၂) ၂-ရက်ကနေ ၇-ရက်အထိဖျားပြီး ခေါင်းကိုက်မယ်။ (၃) မျက်စိနောက်မှာ နာကျင်မယ်။ (၄) ကိုယ်လက်တွေကိုက်ခဲမယ်… စတဲ့ `ဝေဒနာ လူxxxx အတွေးလေမှာနှင်xxxx´ ဆိုသလို ဝေဒနာလူဖြစ်သွားမယ်လေ။ ဒါကြောင့် နီးစပ်ရာ ဆေးရုံ၊ ဆေးပေးခန်း ရှိရာဆီကို အမြန်ဆုံးချီတက်ကြဖို့ အကျိုးမျှော်လို့ နိုးဆော်လိုက်ရပါတယ် အရပ်ကတို့…။
** ရွာဆော်- ဂုရုဆန် **
သနပ္ပင်၊ မကျင်လှ၊ နွားဆေးလိပ်ကတထုပ်
၅ (ည) လို့ ထင်ထင်ရှားရှား
Posted by JACBA at 6:03 AM0comments Links to this post
ဗန်းမော်ဆရာတော်ကား စာချိုးဝါသနာထုံ၏။ ယင်းစာချိုးဝါသနာကြောင့် ထင်ရှားကျော်ကြားဘိသကဲ့သို့ ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနှင့်လည်း ကြုံရ၏။ သို့သော် ဆရာတော်ကား လောကဓံကို မမှု၊ သာသနာ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းတွင် ယုတ်လျော့ အားလျော့ခြင်းမရှိပါ။
သာသနာရေး၊ တိုင်းရေးပြည်ရေးတို့တွင် အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့မနေ။ သူတစ်ပါးတို့၏ ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ်များကိုလည်း ဆင်ခြင်သုံးသပ်လေ့ရှိသည်။
ပမာအားဖြင့် လွှတ်တော်ဝန်ကြီးများအကြောင်း ဆရာတော်စာချိုးပုံကို ဖော်ပြလိုပါသည်။
- ပခန်းမြို့ စား၊၀န်ရှင်တော်မင်းကြီးသည် လေနာရောဂါ စွဲကပ်နေသည်။ အမှုအခင်းများကို ကောင်းစွာ မဆုံးဖြတ်နိုင်။
- လောင်းရှည်မြို့ စားဝန်ရှင်တော်မင်းကြီးသည် မြင်ကွန်းမြင်းခုံတိုင်အရေးတွင် ဓားဒဏ်ရာရရှိခဲ့သဖြင့် ချည့်နဲ့နေသည်။ ထို့ကြောင့် အမှုအခင်းများကို ကောင်းစွာ မဆောင်ရွက်နိုင်။
- ခန်းပတ်မြို့ စားဝန်ရှင်တော်မင်းကြီးသည် နားထိုင်းသည်။
- ရေနံချောင်းမြို့ စားမင်းကြီးတစ်ပါးသာလျှင် သန်စွမ်းသည်။ ထို့ကြောင့် အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတွင် လစ်ဟာမှုများ ရှိလာနိုင်သည်။
လင်းပါ့မလား…” ဟု စာချိုးကာ သတိပေးခဲ့ဖူးပါသည်။
ဆရာတော်သည် ကဗျာချိုးစာချိုးစရာရှိလျှင် မှန်သည်ထင်လျှင် ဆိတ်ဆိတ်မနေတတ်၊ ပြောတတ်ရေးတတ်သည်။ သုဓမ္မာ ဆရာတော်များကိုပင် အလွတ်မပေး၊ ရေးစရာရှိလျှင် ရေးတတ်လှ၏။
- သက်ပန်းဆရာတော်သည် သုဓမ္မာအစည်းအဝေးများတွင် တသမ်းသမ်းတဝေေ၀ နေတတ်သည်။
- လှထွေ ဆရာတော်ကား စာပေမတတ်ကျွမ်းလှ။
- စလင်း ဆရာတော်ကာ ကျမ်းဂန်တတ်သည်။ စာကြည့်ပျင်းသည်။ မူရင်းကို ပြန်မကြည့်ဘဲ နှုတ်လွတ်ဆိုတတ်သည်။
- နန္ဒာဘိဓဇဘွဲ့တော်ရ ပုခန်း ဆရာတော်သည် အပြောအဟောကောင်းသည်။ ပရိသတ်နှင့် တသောသော နေတတ်သည်။
- မဏ္ဍလာရာမတိုက်ပြည်ဆရာတော်သည် အမှုအခင်းများကို မစုံစမ်း မမေးမြန်းခင်ကပင် ငေါက်ငမ်းတတ်သည်။
“မောင်သက်ပန်းက သမ်း ဝေေ၀
သောသောညံ၏” ဟူ၍ စာချိုးခဲ့လေသည်။
ဗန်းမော်ဆရာတော်သည် ဗန်းမော်မှ ပြန်ရောက်ပြီးကတည်းက နေပြည်တော်သို့ ပြန်၍ မကြွ၊ စစ်ကိုင်းမြောက်ဘက် ပိတောက်ချောင်တွင် သီတင်းသုံးနေလေသည်။ စာပေပို့ချ တရားဓမ္မနှင့် မွေ့လျော်နေသည်။ အချိန်ရသည့်အခါများတွင် ရတနာထွဋ်ခေါင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကို သွားရောက်ကန်တော့လေ့ရှိပါသည်။
ရတနာထွဋ်ခေါင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသည် ဗန်းမော်ဆရာတော်ထက် သက်တော်ဝါတော်ပါ ကြီးသည်။ စာပေကျမ်းဂန် အလွန်နှံ့စပ်ကျွမ်းကျင်သည်။ ၀ိပဿနာ ဥာဏ်အမြင် ရှင်းပြီး တရားရနေသည့် ကိုယ်တော်ကြီးဖြစ်ပါသည်။ ဗန်းမော်ဆရာတော်က ထွဋ်ခေါင်ဆရာတော်ကို အလွန်လေးစားကြည်ညိုသကဲ့သို့ ထွဋ်ခေါင်ဆရာတော်ကလည်း ဗန်းမော်ဆရာတော်ကို ချစ်ခင်သည်။
ဆရာတော်ကြီး၏ ကျောင်းဝင်းအတွင်း မယ်သီလများလည်း သီတင်းသုံးနေထိုင်သည်။ ဤသည်ကို ဗန်းမော်ဆရာတော်က မနှစ်ခြိုက်ပေ။ ကျောင်းဝင်းအတွင်း ၄င်းတို့ရှုပ်နေသည်ဟု မြင်သည်။ ထို့ကြောင့် ဆရာတော်က စာချိုးခဲ့ဖူးလေသည်။
သီလရှင်တစ်ပါး၏ ကျောင်းဝင်းအတွင်းမှ ထိုစာချိုးကို ရသည်။ ဆရာတော်ကို စာချိုးအား ဆက်သည်။ ဆရာတော်က စာချိုးအား ဖတ်ပြီး ပြုံးတော်မူသည်။
ထွဋ်ခေါင်ဆရာတော်၏ ငယ်မည်မှာ ဦးညိုဖြစ်သည်။
စာချိုးကို ဖတ်ပြီးသည်နှင့် ဗန်းမော်ဆရာတော်၏ လက်ချက်မှန်း ချက်ချင်းသိသည်။ ထို့ကြောင့် အနီးရှိ ဦးပဉ္စင်းတစ်ပါးကို မိန့်သည်။
“ဒီစာချိုးရေးတာ ဗန်းမော်ဆရာတော်ပဏ္ဍိတပါပဲ။ ငါ့ကို အခြားပုဂိုလ်ဆို ဒီလို ဘယ်ရေးရဲပါ့မလဲ။ ငါ့ငယ်နာမည်သုံးရဲတာပဲ ချင့်တော့။ ကဲ- ကဲ- ဗန်းမော်ဆရာတော်ကို ဆွမ်းစားပင့်ချေ။”
ထွဋ်ခေါင်ဆရာတော်မှာသည့်အတိုင်း ဦးပဉ္စင်းလည်း ဗန်းမော်ဆရာတော်ထံ သွားရောက်၍ ဆွမ်းစားပင့်သည်။ ဗန်းမော်ဆရာတော်လည်း လိုက်၍ လာသည်။ ထွဋ်ခေါင်ဆရာတော်အား ရိုသေစွာ ကန်တော့သည်။
“ဗန်းမော်တို့ က စာချိုးတာတယ်ပြီး ၀ါသနာကြီးတာကိုး”
“စာချိုးကောင်းလို့ ဗန်းမော် အပို့ခံရတယ်။ ပြန်ရောက်တော့လဲ စာချိုးတုန်းပဲလား”
ထွဋ်ခေါင်ဆရာတော်က အေးချမ်းစွာပင် မေးသည်။ ဗန်းမော်ဆရာတော်က မည်သို့မျှ မဖြေ၊ ပြုံး၍သာနေတော် မူသည်။
“ဦးရွှေညို သီလချောရယ်နဲ့ တောခိုတဲ့ချောင်ဆိုတာ… သီလရှင် ချောချောကလေးတွေနဲ့ နေတယ်လို့ ဆိုလိုတာလား”
“တပည့်တော် ဒီလိုရည်ရွယ်ပြီး ရေးတာမဟုတ်ပါဘူး ဘုရား”
“ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်များလဲကွယ့်၊ ရှင်းလင်း စမ်းပါဦး”
“တပည့်တော်ရဲ့ ဆိုလိုရင်းက ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ သီလသိက္ခာတော်ဟာ အဖုအထစ်အငြိအစွန်း မရှိပါဘူး။ လုံးဝချောမွေ့ပါတယ်။ စင်းလုံးချော ချောနေပါတယ်လို့ ဆိုလိုရင်းပါဘုရား”
“သီလရှင် ချောချောကလေးတွေကို ဆိုလိုတာ မဟုတ်ဘူးပေါ့”
ထွဋ်ခေါင်ဆရာတော်ဘုရားက အသံထွက်အောင်ပင် ရယ်တော်မူသည်။ ဒေါသရိပ်မရှိ။ ဒေါသသံမပါ။
“တော်ပါတော့ ဗန်းမော်ရယ်၊ မူလဆိုလိုရင်းက ဒီလိုဟုတ်မယ်မထင်ပါဘူး။ ဟဲ- ဟဲ- ဟဲ။ ထ- ထ ဆွမ်းဘုဉ်းပေးကြရအောင်”
ထွဋ်ခေါင်ဆရာတော်ဘုရားသည် ဗန်းမော်ဆရာတော်အပေါ် မည်သို့မျှ ငြိုငြင်ခြင်းမရှိ။ ဆွမ်းအတူ ဘုဉ်းပေးကြသည်။ ထို့နောက် တရားဓမ္မကို စိတ်ဝင်စားစွာ ဆွေးနွေးနေကြသည်။ နေညိုမှပင် ဗန်းမော်ဆရာတော်လည်း ပိတောက်ချောင်သို့ ပြန်ကြွတော်မူသည်။ ဆရာတော်ကား စာချိုး ၀ါသနာထုံတော်မူစွ။
Posted by JACBA at 6:00 AM0comments Links to this post